ကိုရွှေဘ၏စွန့်စားခန်းများ – Grab Love Story
ဒီနှစ်ဆောင်းကတော်တော်လေးအေးတာကိုးဗျ။ ကင်းတဲဘေးက ကြက်ခွပ်ပင်ကြီးအောက်မှာ ထင်းတုံးကြီးကြီးကိုမီးဖိုထားပီး မီးဖိုဘေးပတ်ပတ်လည်မှာကျနော်တို.ရပ်ကွက်ထဲကလူငယ်တွေ
စောစောပိုင်းက ဂျပန်ခေတ်အတွေ.အကြုံတွေပြောပြနေတဲ့လူကြီးတွေတောင်ပြန်အိပ်ကုန်ပီ။ ကျနော်တို.ချာတိတ်တွေရယ်၊ လူလတ်ပိုင်းတချို.ရယ်ပဲကျန်ခဲ့ပီးစကားဝိုင်းဆက်နေကြတာပေါ့လေ။
ရောက်တတ်ရာရာတွေပြောရင်း တစ္ဆေ၊သရဲအတွေ.အကြုံတွေဘယ်ကဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းမသိပါဘူး။ တစ်ယောက်ပီးတစ်ယောက် သူ.ထက်ငါအတွေ.အကြုံတွေဖလှယ်နေကြတာဇတ်လမ်း
တွေကစုံလာရောဗျ။ ဟုတ်တာတွေရော၊မဟုတ်တာတွေရောစုံလာတော့ ဘယ်သူမှအပေါ့အပါးသွားချင်တာတောင်မထရဲတော့တဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။
အထက ကျောင်းဝင်းထဲကကျောမှာအပေါက်ကြီးနဲ.ကျောပေါက်စစ်သားသရဲတို.၊ ဗောဓိကုန်းအတက်က နှစ်ဆောင်ပြိုင်အိမ်ပျက်ကြီးရှိတဲ့ဝင်းထဲမှာ လပြည့်ညဆိုသီချင်းတအေးအေး
နဲ.ထွက်ပီး က နေတတ်တဲ့ခြေထော့ကျိုးဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်မ..ဘိုမခြေကျိုးသရဲတို.၊ ဗြိတိသျှခေတ်ကထဲကနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ကျနော်တို.မြို.ကအကျဉ်းထောင်ကြီးရဲ.အုတ်ရိုးပေါ်လမ်းတက်
လျှောက်တာမြင်ရတဲ့ ထောင်ပိုင်ကြီးကတော်သရဲမတို. အဲ့လိုတွေပြောနေရင်းလူတွေအကုန်လုံးကနောက်ကျောမလုံသလိုဖြစ်ဖြစ်လာရော။ ညကလဲမှောင်ပိန်းလွန်းပီးနှင်းတွေကလည်းတဖွဲ
တဟဲဟဲ.. ရယ်သံနဲ.အတူလူတစ်ယောက် မီးဖိုကိုဝိုင်းဖွဲ.ထားတဲ့ကျနော်တို.လူစုထဲကိုအတင်းတိုးဝင်လာတော့ အားလုံးလန်.ဖြန်.ကုန်တယ်။
နဂိုက သစ်ကိုင်းလေတိုးလို.ဖျောက်ကနဲမြည်ရင်တောင် တုန်တဲ့အထိလန်.နေကြတဲ့လူစုထဲ ဝုန်းကနဲဝင်ထိုင်လိုက်တော့စဉ်းစားတာကြည့်ကြတော့ဗျာ။ အလန်.ပြေသွားလို.သေချာကြည့်လိုက်
မှ.. ကျနော်တို.ရပ်ကွက်ထဲကဇတ်လိုက်ကျော်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကတ္တီပါစနဲ.ချုပ်ထားတဲ့လောင်းကုတ်ရှည်ကြီးကိုဝတ်လို.၊ဆံပင်ကဂုတ်ထောက်၊ အသားအရည်ကတရုတ်စပ်မှန်းသိသာနေတယ်။မျက်လုံးကမှေးမှေးနဲ.အဲ့ဒီခေတ်အခါက အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ ကွန်ဖူးမင်းသား ဘရုစ္စလီရုပ်မျိုး။(သူကလည်းမတူတူအောင်ဂိုက်ဖမ်းနေတာပါ)
စကားပြောလိုက်ရင်ပါးစပ်ထဲကရွှေသွား၂ချောင်းကလက်ကနဲလက်ကနဲ ဖြစ်သွားသေးတယ်။ ကိုရွှေဘ!! လို.အားလုံးပါးစပ်ကအသံထွက်သွားကြတယ်။ သူတဟဲဟဲ ထပ်ရယ်လိုက်ပီး …
ငါရောက်နေတာကြာပီဟ..မင်းတို.ပြောနေတာတွေအကုန်ရပ်ပီးနားထောင်နေတာ.. မင်းတို.သရဲဇတ်လမ်းတွေက အာလူးတွေပါကွာ.. … …
အားလုံးမကျေမနပ်ဖြစ်သွားပေမယ့်ပြန်တော့မပြောရဲဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်ကသူက၃၅-၃၆လောက်ရှိနေတော့လူကြီးပေါ့လေ။ ပီးတော့ရပ်ကွက် ကာလသားခေါင်း၊ သဘောအင်မတန်ကောင်းသ
မင်းတို.ကျတ်တီးကုန်းဆိုတာကြားဖူးကြလား၊ကြုံဖူးသလား.. ငါမေးမယ်ဖြေကြ !! (အားလုံးတိတ်နေကြတယ်)
အေး!! အဲ့ဒါကျတ်တီးကုန်း..ဒါမှမဟုတ်ကျတ်ရွာလို.ခေါ်တယ်.. ပရလောကသားတွေရဲ.နေရာကိုရောက်သွားတာပေါ့လေ..
နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်.. အုတ်ဒဇောင့် (ဥစ္စာစောင့်) ဆိုတာ..ဘုရားဌာပနာတို. သိုက်တို.ကိုစောင့်ရတဲ့အစောင့်မျိုးကိုခေါ်တာ..တန်ခိုးလေးဘာလေးအထိုက်အလျောက်ရှိတော့လူ
ဟာ! ဒီသူတောင်းစားလေးကလည်းအူတူတူနဲ. … တူတူအိပ်တယ်ဆိုတာ.. ငါအဲ့ဒီဥစ္စာစောင့်မလေးဆိုတာတွေ.ဖူးရုံတင်မကဘူး.. အုပ်တောင်အုပ်ခဲ့တာဟ..၂ချီတောင်တွယ်ခဲ့တာ..
အားလုံးမယုံသလိုမျက်နာပေးနဲ.ဖြစ်သွားပေမယ့် ကိုရွှေဘဆိုတာနေရာတကာနှံ.စပ်နေတော့ကာဟုတ်များဟုတ်နေမလားဆိုပီးဇဝေဇဝါမျက်နာလေးတွေကိုယ်စီနဲ.ဖြစ်ကုန်ရော။ ပီးတော့ဟုတ်
တာမဟုတ်တာအပထား ကိုရွှေဘကလေပစ်ရမယ်ဆို အမူအရာလေးတွေဘာတွေနဲ.ဆိုတော့ အညှီအဟောက်ဇတ်လမ်းလေးတွေပါမှာပဲဆိုပီး မျှော်လင့်တကြီး သူပြောလာမှာကိုတိတ်တိတ်
လေးနေပီးမျှော်နေကြတာပေါ့။ အားလုံးနားထောင်ချင်နေကြတာသိသာနေတော့ ကိုရွှေဘ ကခပ်တည်တည်နဲ. လောင်းကုတ်ဘေးအိပ်ထဲက စကားဝါတံဆိပ်ဆေးပေါ့လိပ်ကလေးကိုထုတ်ပီး
မီးညှိရင်းဖွာနေပြန်တယ်(ဟန်လုပ်ပီးဂိုက်ထုတ်နေတာ)။ ၃-၄ဖွာလောက် ဆက်တိုက်ဖွာပီးမှ လေသံခပ်အုပ်အုပ်နဲ.စကားစပြောတယ်။
ဒီလိုကွ.. ငါအသက်၂ဝကျော်လောက်ကပေါ့.. ကျားပျံမကောက်ဆေးပေါ့လိပ်ဒိုင်က အဖိုးကြီးဆုံးတော့ အသုဘမှာဖဲဝိုင်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ရောဆိုပါတော့… … …
ဖဲဝိုင်းကရက်လည်တဲ့နေ.အထိလူစည်ကားချက်ကကွာ.. ဟိုးဗမာပြေကအောက်သားတွေတောင်တက်လာပီးသူသေကိုယ်သေဆော်ကြတာပေါ့။ (အသားအရေညိုသောလူတွေကိုကျနော်တို.အရပ်တွင်အောက်သား သို.မဟုတ်ဗမာပြေသားလို.ခေါ်ပါတယ်) ငါလည်းဘယ်နေလိမ့်မလဲရှိတာအကုန်ထုတ်ပီးဆော်တာနေ.တိုင်းကိုကွဲတာဟေ့။
အိမ်ကလည်းပိုက်ဆံကဖန်လို.မရတော့ဘူး။ အတယ်(သူ.အဖေတရုတ်ကြီး)ကလည်းငါဆိုင်ကပိုက်ဆံတွေခိုးခိုးပီးဖဲချနေတာရိပ်မိတော့အလစ်ကိုမပေးဘူးဖြစ်လာတော့ ငါ့ရည်းစားအပျိုကြီးဆီ
ဟိုကျောင်းဆရာမကြီးလား.. ကိုရွှေဘရည်းစားက..ဒေါ်နော်မူလေ ဝတုတ်တုတ်ကြီး..အသက်ကြီးနေပီဟီးဟီး (အကြောင်းသိတဲ့ကျနော်ကဝင်နောက်လိုက်တယ်)
ဟေ့ကောင်!! ဖိုးသက်.. အေပေးလေး … အဲ့ဒီတုံးကသူ.အသက်က၄၂-၄၃ ပဲရှိသေးတယ်..ပီးတော့ခုလိုပုံမဟုတ်ဘူး..တောင့်တောင့်တင်းတင်းလှတပတကြီး..ခုပြတ်သွားတာကြာပီ..တော်..
ဖဲကလည်းနိုင်လူကလည်းစိတ်ကြွလာတော့..အရက်ကိုတောင် အာမီရမ်သွားရှာခိုင်းပီးသောက်ကရော။ ဘီအီးတွေ၊မီးတောက်တွေလုံးဝမသောက်ဘူး။ ငွေသောင်းချီကိုင်ထားတဲ့ကောင်ကိုး။
အင်း.. ည၁၂နာရီကျော်လာတော့ မူးကလည်းမူးသွေးကလည်းကြွကြွဆိုတော့ တဖြေးဖြေးပြန်ကုန်လာတာနောက်ဆုံးအပျိုကြီးဆီကဖန်လာတဲ့ပိုက်ဆံကောဆွဲကြိုးပါကုန်တဲ့အပြင်အိတ်ကပ်
ထဲမှာကျပ်တန်လေးတစ်ရွက်တောင်မကျန်တော့ဘူးကွာ။ ခုနက ဘေးမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့သူတောင်းစားတပည့်တပန်းတွေဆိုတာဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိတော့ဘူး။ ပိုက်ဆံမကျန်တော့
လို.၀ိုင်းပြင်လည်းရောက်နေပီ။ လူကလည်းတော်တော်လေးထွေနေပီ။ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ.အသုဘရှင်ဧည့်ခံတဲ့ညလည်စာ ဆန်ပြုတ်ကလေးသောက်ပီးပြန်မယ်ပေါ့လေ။ ဒါနဲ.အောက်ထပ်ကို
ဆင်းလာတော့လှေခါးရင်းမှာချွတ်ထားတဲ့ငါ့မြင်းကြယ်ဖိနပ်မရှိတော့ဘူးကွ။ တောက်!! ယိုးဒယားမြင်းကြယ်ဖိနပ်အစစ်ကလေးကွာ။ ပိုပီးဒေါကန်ချင်စရာကောင်းတာက ညာဖက်တစ်ဖက်ထဲ
ပျောက်နေတာ၊ရှာတာလည်းနှံ.နေပီ။ မတွေ.လေဒေါကန်လေပေါ့။ ဖဲရှုံးလို.စိတ်ညစ်လာတာဖိနပ်ပါပျောက်ပီးပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့သောက်ထားတဲ့အရက်ရှိန်ကြောင့်ဘယ်လောက်ဒေါသ
ထွက်မလဲဆိုတာမင်းတို.ပဲတွေးကြည့်။ဒါနဲ.ပဲ.. အိမ်ပေါ်ပြန်တက်ပီး အိမ်ရှင်ဆီကဘန်နီကြိုး(ဂုန်လျှော်ကြိုး) ရှည်ရှည်တစ်ချောင်းလောက်တောင်းပီး အိမ်အောက်ကိုအသာလေးပြန်ဆင်း
ဘာလုပ်ရမလဲ..လက်စားချေတာလေ..အကုန်မြစ်ထဲသွားမျှောမလို. ခိုးလာတာ၊ ဖဲရိုက်တဲ့လူအတူတူချင်းငါကဖဲလဲရှုံးသေးဖိနပ်လည်းတစ်ယောက်ထဲပျောက်တော့မတရားဘူးထင်လို.
အဟီး.. မနက်မိုးလင်းရင်ဖဲဝိုင်းကလူမှန်သမျှ .. ဘယ်ဖက်တစ်ဖက်ပဲရှိတဲ့ဖိနပ်ကိုစီးပီးအိမ်ပြန်နေတာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ရင်းငါ့မှာတခွိခွိနဲ.ပေါ့ … …. …
ကုက္ကိုပင်တန်းအုပ်အုပ်တွေအဆုံးမှာ ဘုရားငုတ်တိုကမ်းပါးရှိတယ်မလား..အေးအဲ့သည့်ကုန်းပေါ်တက်သွားရောဆိုပါတော့။ ပုံမှန်အချိန်ဆိုဘယ်တက်ရဲပါ့မလဲ မင်းတို.သိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနေရာ
ကနာမည်ကြီး။ (ဘုရားငုတ်တိုကမ်းပါးမှာမြစ်ပေါ်တွင်မေးတင်ထားသော စေတီပျက်အတော်များများရှိသောနေရာ၊ တချိန်ကအကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ဖူးပီးလူအတော်များများသေခဲ့သည့်
နေရာဟုသိကြသည့်အပြင်လပြည့်ညများတွင်စောင်းတီးနေသော ဥစ္စာစောင့်မများကိုမြင်ရသည်၊ ဘုရားဌာပနာစောင့်ဘီလူးသဘက်များဖမ်းစားသည်၊ တစ္ဆေခြောက်သည်ဟုအလွန်နာမည်
ကျော်သောနေရာ)ငါလည်းသောက်ထားတဲ့အရှိန်နဲ.ဆိုတော့ မကြောက်ဘူးဆရာ၊လောလောဆယ်ဒီဖိနပ်တွေကို မြစ်ထဲပစ်ဖို.အရေးကြီးတာလည်းပါတာပေါ့။ ဘုရားကုန်းကသိတဲ့အတိုင်း
ဂျာမဏီခြုံတွေထူတော့ ငါလည်းအတင်းတိုးရင်းနဲ.မြစ်ကမ်းပါးအစွန်းကိုရောက်သွားရောဗျ။ ကမ်းပါးအစွန်းက ကုက္ကိုပင်ကြီးခြေရင်းကနေဖိနပ်အတွဲကြီး ကိုအားနဲ.မြစ်ထဲလွှဲပီးပစ်လိုက်တာ
ရေထဲဝုန်းကနဲကျသွားသံကြားရတော့မှပြန်မယ်ဆိုပီး အလှည့်မှာ စေတီပျက်နှစ်ခုကြားထဲက အုတ်ခုံကြီးပေါ်မှာ ဆံပင်ဖားလျားချထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ထိုင်နေပါရောလားဗျာ။ အရက်မူး
နေတာတောင်ပြေသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟ။ ဆံပင်တွေတောင်ထောင်လာသလိုပဲ။ တခြားလမ်းလှည့်ပီးပြေးရအောင်ကလည်း မင်းတို.သိတဲ့အတိုင်း နောက်မှာကမ်းပါးအမြင့်ကြီး၊ ဘေး၂ဖက်က
ခြုံတွေကလည်းတိုးလို.မပေါက်တတ်။ ဒီစေတီငုတ်တိုနှစ်ခုအလယ်ကနေပဲထွက်လို.ရမှာကို အဲ့ဒီဥစ္စာစောင့်မက ပိတ်ပီးထိုင်နေတော့ ငါ့မှာဒူးတဆတ်ဆတ်တုန်ပီး ကြောက်လိုက်တာကွာ။
ရုတ်တရက်ကိုရွှေဘစကားပြောတာရပ်သွားပီး ကျနော့်လက်ထဲကရေနွေးခွက်ကိုလှမ်းယူပီး တဂွပ်ဂွပ်မော့သောက်နေတယ်။
ဒါသူ.သောက်ကျင့်လေ။ အားလုံးစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်လာပီဆိုအဲ့လိုပဲ။ သောက်ပီးမှဆေးပေါ့လိပ်ကိုဆက်ဖွာနေတယ်။ ဘာမှတော့ဆက်မပြောသေးဘူး။ မီးဖိုဘေးမှာဝိုင်းထိုင်နေကြတဲ့လူတွေကလည်း
တိတ်ဆိတ်လို.။ ကိုရွှေဘရဲ. လေကလည်းသိတယ်မလား။စပီဆိုတာနဲ.အမူအရာတွေဘာတွေနဲ.ပြောတာကိုး။ ဖဲဝိုင်းကိစ္စတွေ၊ဖိနပ်တွေခိုးပီးလွယ်ယူလာတာတွေပြောတုံးကတဟီးဟီးနဲ.အားလုံးသ
ဘောတွေကျနေရာကခုလိုသည်းထိတ်ရင်ဖိုခန်းရောက်လာတော့အားလုံးငြိမ်သက်လို.ပေါ့။ ဟိုမှာက ဥစ္စာစောင့်မနဲ.ပက်ပင်းတွေ.နေပီဆိုတာကိုးဗျ။ ကိုယ်တွေသာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲတွေးရင်း
ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတာဗျ။ ဒီကြားထဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာမွေးထားတဲ့ ခွေးအုပ်လိုက်ကြီးကလည်း တစ်ခုခုမြင်လိုက်သလို အူး …ဝူ..ဝူ .. ဆိုပီးအုပ်လိုက်ထအူလိုက်တော့
အားလုံးတုန်ကုန်ရော။ ခွေးအူသံတွေတိတ်သွားတော့ မီးကင်းတဲရဲ.အမိုးသွပ်ပြားပေါ် နှင်းတွေတဖြောက်ဖြောက်ကျနေသံကလွဲပီးအကုန်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်ရော။ အဲ့ဒီတော့မှကိုရွှေဘသက်ပြင်း
ချသံ ဟင်းကနဲကြားလိုက်ရပီး စကားဆက်ပြောတယ်.. … …
ငါမကြောက်တတ်တာမင်းတို.သိပါတယ်။ လက်ပံတန်းမှာဘုရားပွဲလုပ်တုံးက အဲ့ဒီရွာက ကောင်တွေ၁ဝယောက်လောက်ဓားရှည်တွေနဲ.၀ိုင်းခုတ်တာငါနဲ.ချီးဗူး၂ယောက်ထဲဝါးဆစ်ပိတ်တွေနဲ.
ထွက်မပြေးပဲခံချလာတာမင်းတို.သိပီးသားပဲလေ။(ကိုယ်ရည်သွေးတာဒင်း ဒါပေမယ့်တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်)ဒါပေမယ့်ခုဟာက မတူဘူး။ သူသေကိုယ်သေချလိုက်ရအောင်လူမှမဟုတ်တာကိုး။
အခြေနေကလည်းခုနကငါပြောခဲ့သလိုပဲပြေးပေါက်ရယ်လို.မရှိတော့ဘူးဟ။ ကောင်းကင်မှာလည်းလကလေးမှမသာ၊ကြယ်ရောင်ပျိုးပျိုးပျက်ပျက်မှာ သေချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်ဗျ။
ဥစ္စာစောင့်မဆိုတာ သိသာတယ်။ ဆံပင်ဖားလျားချလို.၊ဒါပေမယ့်မင်းတို.ငါတို.ကြားဖူးသလို အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံတော့မဝတ်ထားဘူးဆရာ။ တစ်ကိုယ်လုံးအဖြူဆွတ်ဆွတ်နဲ.ဟ။ ဘုရားစာတွေ
ဘာတွေဆိုတာကလည်းအကုန်မေ့ကုန်ပီ။ ငါ့အတွင်းခံအင်းကျီ အိပ်ကပ်ထဲမှာ ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်းဝင်တုံးကရထားတဲ့ အင်းကွက်ချထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးငါးကျပ်တန်အပြာလေးကိုသတိရလို.နှိုက်
ကြည့်သေးတယ်။ သရဲသဘက်နိုင်တယ်လို.ပြောတာကိုး။ မရှိတော့ဘူးဟ..ခုနင်ကဖဲဝိုင်းမှာ ယူပီးဖဲရိုက်ရှုံးပစ်လိုက်တာနေမှာ။ ဒါနဲ.ငါလည်းဝိဉာဉ်အနှုတ်ခံရမလား၊ သိုက်စောင့်ဘီလူးပဲခေါ်
မောင်တော်!! တဲ့.. … ….
စကားလှမ်းပြောတော့ငါလည်းလန်.သွားတာပေါ့။ ဥစ္စာစောင့်မက အဲ့ဒီ၂ပေခွဲလောက်ရှိတဲ့အုတ်ခုံလေးပေါ်ကနေမထပဲပြောနေတာဟေ့ကောင်ရေ။ မောင်တော်နှမတော့်ကို မမှတ်မိဘူးလားတဲ့။
ငါလည်းအူကြောင်ကြောင်နဲ.ဟုတ်ကဲ့မတွေ.တာကြာလို.ပါဆိုပီးယောင်ပီးပြောလိုက်မိသေးတယ်။ အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဥစ္စာစောင့်မက တခစ်ခစ်နဲ.သဘောတွေကျနေသေးတယ်ဗျ။ငါလည်းကြောက်စိတ်တော့နည်းနည်းလျှော့သွားတယ်ဟ။ ဒါမျိုးကမင်းတို.လည်းကြားဖူးပါတယ်။ သိုက်အစောင့်တွေဘာတွေကသဘောကျရင်ရွှေမန်ကျည်းသီးတောင့်တွေပေးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလေ။ ဒီတော့ငါလည်းကြောက်ပေမယ့်မီးစင်ကြည့်ကမယ်ပေါ့။ အနားကိုပိုတိုးကပ်လိုက်
တော့ဟေ့ကောင်ရေ.. ချောချောလှလှလေးဗျ။ နှာတံလေးကချွန်ချွန်လေး မျက်နာကခပ်သွယ်သွယ်လေးနဲ. မျက်လုံးဝိုင်းစက်စက်ကလေးနဲ.ဗျ။ ကြည့်ရတာရှမ်းမကွ။ သေချာတယ်ရှမ်းဥစ္စာစောင့်မ။ ပြုံးပြုံးလေးလုပ်ရင်းထလာပီး … … ….
နန်းကြာဖြူလေမောင်တော်ရဲ. .. မောင်တော့်အချစ်နန်းကြာဖြူ.. ဆိုပီး ငါ့ရင်ခွင်ထဲဝင်လာရောဗျ။
နန်းကြာဖြူဆိုတဲ့ အသံကြားတာနဲ. ကျနော်တို.နားထောင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရင်ထိတ်ကုန်တယ်ဗျ။
ဒီလိုလေ.. နန်းကြာဖြူဆိုတာ ကျနော်တို.မြို.မှာနာမည်မှာအင်မတန်နာမည်ကျော်တဲ့ ဥစ္စာစောင့်မလေ။ ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့လေ။ မြို.အဝင်ကနေမြင်းလှည်းငှါးစီးပီးဘုရားငုတ်တို
နားရောက်တော့ပျောက်သွားတာတို.၊ ညဖက်ဗယာကြော်လိုက်ရောင်းတဲ့ ကုလားကိုရွှေဒင်္ဂါးပြားတွေနဲ.ဗယာကြော်ဝယ်စားတာတို.အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။ ခင်ဗျားတို.မြို.တွေမှာရှိခဲ့ဖူးတဲ့ထူးမခြားနား
ဥစ္စာစောင့်ပုံပြင်တွေလိုပါပဲ။ တစ်ခုပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ဖူးတာက.. ကျနော်တို.ငယ်ငယ်က တက္ကသိုလ်တက်ပီးပြန်လာတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဗျာ၊ အဲ့ဒီခေတ်ကသိတယ်မလား စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆိုတာ R.I.T တစ်ခုပဲရှိတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ တစ်မြို.လုံးမှာ ထင်ပေါ်နေတဲ့ လူငယ်မျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီကောင်က ခေတ်ပညာတတ်ဘာညာဆိုပီး ဘုရားငုတ်တိုနားသွားသွားထိုင်တာ လပြည့်
ညမှာစောင်းထွက်တီးတဲ့ နန်းကြာဖြူနဲ.ကြိုက်ရောဆိုပဲ။ တဖြေးဖြေး လူတွေသတိထားမိလာတော့သူ.အိမ်ကလည်းစိုးရိမ်လာတာပေါ့။ ညဖက်ဆိုဘုရားငုတ်တိုဖက်လစ်လစ်သွားတာလေ။ တရက်ကျတော့ ညဖက်ကြီး အဲ့ဒီလူ ဝူးဝူးဝါးဝါးတွေ အော်ရင်းဘုရားငုတ်တိုဖက်ကပြေးလာတာလူတွေဝိုင်းဖမ်းပီးချုပ်ထားရတယ်။ ပါးစပ်ကလည်းဘာတွေအော်လို.အော်မှန်းမသိ။ ကျောကရှပ်အင်းကျီကလည်းစုတ်ပြဲပီး လက်ဝါးရာမဲမဲကြီး အပြားလိုက်ထင်နေတယ်ဆိုပဲဗျ။ နန်းကြာဖြူဆီ သွားတာအထိန်းတော် ဘီလူးနဲ.တွေ.သွားတယ်ဘာညာတော့ပြောကြတာပဲလေ။အဲ့ဒီလူ
လည်းသွက်သွက်ခါအောင်ရူးပီး နန်းကြာဖြူ ရေ..ဘာညာတွေလျှောက်အော်တော့ နောက်ဆုံး အခန်းထဲမှာသံကြိုးနဲ.ချည်ထားရတဲ့အဆင့်ရောက်ပီး မစားနိုင်မအိပ်နိုင်နဲ.သေသွားရှာတယ်။
ခုနားထောင်နေတဲ့ဇတ်လမ်းထဲမှာ ကျနော်တို.ကိုရွှေဘနဲ. ထိပ်တိုက်တိုးနေပီကောဗျ။ ထစ်ကနဲဆိုရိုက်မယ်ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့တစ်မြို.လုံးကရှိန်တဲ့ လူမိုက်နဲ.တစ်မြို.လုံးက ကြောက်ကြတဲ့
ဥစ္စာစောင့်မတွေ.နေပီလေ။ အားလုံးဇတ်ရှိန်တက်နေပီဗျာ။ သက်ပြင်းလေးတွေခိုးချပီး ကိုရွှေဘမျက်နာကိုအားလုံးငေးပီးနားထောင်နေကြတယ်။ ကိုရွှေဘဆက်ပြောတယ်… … ….
ဥစ္စာစောင့်မလာဖက်ထားတာရယ်..ဘယ်ချိန်အထိန်းတော်ဘီလူးထွက်လာပီးငါ့ကို ရိုက်မလဲဆိုပီးလန်.နေတာရယ်လူကိုသေးပါမတတ်ပဲငါ့ကောင်တွေရေ။ နည်းနည်းကြာလာတော့ အဲ့ဥစ္စာစောင့်
မကငါ့ကိုဖက်ထားပီး စကားတွေတတွတ်တွတ်ပြောတော့ပဲဟ။ မောင်တော်ရယ်..နှမတော်ကမောင့်တော့်ကိုစောင့်နေတာ နှစ်တွေရာချီနေပါပီဘာညာတွေပေါ့.. ပြောရင်းငါ့ရင်ဘတ်တွေကိုဟို
ပွတ်ဒီပွတ်လုပ်စပြုလာတယ်..ပထမတော့ကြောက်နေတာ..ကြာလာတော့ အေပေးငါလည်းသောက်ကျင့်ကတန်တန်ဆိုတော့ -ီး တောင်ချင်သလိုဖြစ်လာတယ်ဟ..ဟီးဟီး .. ဒါနဲ.မသိမသာလေးကောင်မ ဖင်တွေဘာတွေကို ကိုင်ပေးလိုက်တော့.. အမယ်..မောင်တော်မောင်တော်ဆိုပီး ဖီးလ်တောင်တက်ပြလာတော့ငါလည်း မထူးဘူးကွာ ဆိုပီးအကုန်လျှောက်နှိုက်ဖို.
ကြိုးစားတော့တာပေါ့။ သူ.ကိုယ်ပေါ်ရုံထားတဲ့ အဝတ်ဖြူအောက်ကို ငါလက်နှိုက်ကြည့်တော့ ဟာ… ဘော်လီလည်းမပါဘူးဟ …
ဟေ့ကောင်!! ငါစကားပြောနေရင်ဖြတ်မပြောနဲ. ငါလည်းဘယ်သိမလဲကွ။
ဘော်လီဖြစ်ဖြစ်၊ရှင်မီးဖြစ်ဖြစ်ကွာကဲ… ဘာမှအခုအခံမပါတာကိုပြောချင်တာ။ နို.ကြီးတွေက ရှောက်ပန်းသီးအငယ်စားလောက်ရှိတယ်ဟ။ ထွားထွားကြီးတွေဗျ။ ငါလည်း အကုန်လျှောက်ကိုင်
ပီးသူ.ဝတ်ရုံဖြူဖြူကြီး ကိုချွတ်ပလိုက်ရောဆိုပါတော့။ အောက်ကလည်းဘာမှမပါဘူးဟေ့။ ဒီတော့ ဖင်တုံးလုံးဖြစ်နေပီ။ ငါကတော့ပုဆိုးကိုစလွယ်သိုင်းပလိုက်တယ်ကွာ ဘာမှမချွတ်ဘူး။ ကြာပါ
တယ်ဆိုပီးကောင်မကို အုတ်ခုံပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ပီး သူ.ေ-ာက်ဖုတ်မှာငါ့ -ီး ကိုတေ့ပီးဆောင့်ချပလိုက်တော့.. အမလေး မောင်တော်..ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ..ဆိုပီး အော်တယ်ဗျ။ ဟ..မထင်ရဘူးနော့်
ဥစ္စာစောင့်မဆိုတော့ တန်ခိုးတွေဘာတွေနဲ.များအပျိုပြန်လုပ်ထားလားမသိဘူး။ ကျပ်နေတာပဲသူ.ပစ္စည်းကမနည်းကိုသွင်းရတယ်ဆရာ။ ငါလည်းမူးကြောင်မူးကြောင်နဲ. အုတ်ခုံပေါ်သူ.ကိုပက်
လက်တွန်းတင်ပီး ဒူးကွေးပီးမတ်တပ်ကိုဆော်တော့တာဟေ့။ နို.ထွားထွားကြီးတွေစုံကိုင်ပီး ပိတ်ပိတ်ဆောင့်တာ.. ဘုရားငုတ်တိုတဝိုက်လုံး ဥစ္စာစောင့်မအော်သံကိုဆူညံနေတာပဲဟီးဟီး… …
ကျနော်ပြောသလိုပဲ ကိုရွှေဘကစကားပြောရင်အမူအရာလေးနဲ.ပြောတော့ …
ခုပြောနေတဲ့အခါမှာ ကို လက်ဟန်ခြေဟန်တွေပါလာပီ။ ကျနော်တို.မီးဖိုဘေးမှာချထားတဲ့ ထင်းစည်းကြီး ကိုတက်ခွပီး သရုပ်ပါဖော်ပြနေတော့ကျနော်တို.နားထောင်နေတဲ့လူတွေမှာတံထွေးတွေတောင်မျိုချမိတယ်ဗျ။ သူ.လေသံကလည်း ပီပြင်တာကိုး ဥစ္စာစောင့်မ အော်သံတွေဘာတွေပါ အော်ပြနေတာ.. မောင်
အမယ်.. လစ်ဖို.မပြင်နဲ.ဆရာ။ ကောင်မကငါပီးသွားလို.ပုဆိုးပြင်ဝတ်နေတာတောင် အတင်းလှမ်းဖက်ပီး နွဲ.နေသေးတာဟ။ မောင်တော်ရေ..ချစ်တယ်ဘာညာနဲ.တတွတ်တွတ်ပြောနေတုံး။
အမှန်ကငါလည်းလစ်ချင်နေပီ။ ဒါကိုကောင်မကဝပုံမပေါ်သေးဘူး။ ငါ့ပစ္စည်းလာကိုင်ပီး -ွင်းထုပေးနေသေးတယ်။ ဟီးဟီး … ဒီလောက်လာဆွပေးနေတော့ ငါလည်းလူငယ်ဘဝဆိုတော့ပြန်ထ
သူ.အိုးကားကားကြီးတွေစုံကိုင်ပီး သမပလိုက်တာဟေ့။ ဒုတိယအချီကနည်းနည်းကြာတော့ပီးသွားတာနဲ.လူလဲနည်းနည်းဟိုက်သွားလို. အုတ်ပုံပေါ်တက်အိပ်နေလိုက်တယ်။ဥစ္စာစောင့်မပေါင်
ကိုခေါင်းလေးအုံးလို.ပေါ့။ အင်း..လူလည်းခဏဆိုပီးမှိန်းလိုက်တာ သတိရတော့ မိုးစင်စင်လင်းနေပီ။ ဟိုဥစ္စာစောင့်မလည်း မရှိတော့ဘူး။ ကမ်းနားလမ်းက လမ်းသွားလမ်းလာတွေကလည်း
ဘုရားငုတ်တိုကုန်းပေါ်က ဝေလီဝေလင်းကြီးဆင်းချလာတဲ့ငါ့ကိုတအံ့တသြကြီး ၀ိုင်းကြည့်လို.ပေါ့လေ။
ကိုရွှေဘဟာက မူးပီးအိပ်ပျော်နေတာနေမှာပါ !! အိပ်မက်လိုလိုဘာလိုလိုကြီး..
ချီး!! မဟုတ်ဘူးဟ.. ငါအိမ်ပြန်ရောက်တော့ သေးပေါက်တာ ငါ့ပစ္စည်းထိပ်မှာကြိမ်းနေတာငါသိတာပေါ့ဟ
ဥစ္စာစောင့်မ ကိုပါကင်ဖွင့်လာတာသေချာတယ်ဟေ့ကောင်ရေ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဘိုးကြီးကညောင်နေလို. ငါတို.လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ နံပြားတွေဘာတွေဝင်ရိုက်နေလိုက်သေးတယ်။
နေ.လည်လောက်ကြမှလင်းလင်းချင်းချင်း ဘုရားငုတ်တိုကိုတစ်ခါပြန်ပီး ဟိုရှာဒီရှာ လျှောက်ကြည့်သေးတယ်။ တစ်ခုခုများသဲလွန်စရမလားလို.ပေါ့လေ။
သြော်! ကိုရွှေဘတို.များ သိုက်စောင့်တွေဘာတွေတောင်မကြောက်ဘူး နှာထတာ..နှာထတာ..ဟားဟား
ဒီလိုပဲငါလည်းတမှိုင်မှိုင်လုပ်ပီး နန်းကြာဖြူကိုလွမ်းနေတာ.. တရက်ကြတော့ငါတို.အိမ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမနက်အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်ဖို.ပြင်ရောဟေ့ … … …. …..
နက်ဖန်မနက်ကပ်မှာဆိုဒီနေ.ညဖက်မှာ အတယ်(သူ.အဖေတရုတ်ကြီး)ကငါ့ကိုမုန်.ဖတ်တွေသွားသယ်ခိုင်းတော့ငါလည်း ကမ်းနားလမ်းမုန်.တီဖိုကိုကြိမ်ခြင်းလေးဆွဲပီးထွက်လာခဲ့တာပေါ့။ညဖက်
၈နာရီလောက်ပေါ့။ မုန်.တီဖိုထဲမှာ မုန်.ဖတ်တွေချိန်တွယ်၊ပိုက်ဆံလည်းရှင်းပီးပြန်ထွက်ခါနီးကျတော့ မုန်.တီဖိုပိုင်ရှင်ရဲ.သမီးအလတ်မက လှေခါးကနေပြေးဆင်းလာပီး မောင်တော်ရဲ.မောင်တော်
ဟာ! နန်းကြာဖြူ ဝင်ပူးတာပေါ့.. ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ.. (ချာတိတ်တစ်ယောက်ရေရွတ်လိုက်သံ)
ကိုရွှေဘကလည်းညံ့ပါ့ဗျာ.. အဲ့လိုဝင်ပူးကပ်ပီးစကားပြောရင်း .. ဘယ်နေ.ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာထပ်တွေ.မယ်ဆိုပီး ထပ်ဒိတ်လိုက်ရမှာ..
ကိုရွှေဘ..အဲ့ဒီကမ်းနားလမ်းမုန်.တီဖိုက အလတ်မဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်လောက်ကဆုံးသွားတဲ့တစ်ယောက်လားဗျ (ကျနော်ဝင်မေးလိုက်သံ)
ရေနွေးမော့သောက်လိုက်နေတဲ့ကျနော်ဖွီးကနဲဖြစ်သွားပီး တစ်ယောက်ထဲအော်ရယ်နေမိတယ်။ ကျန်တဲ့ချာတိတ်တွေကအူကြောင်ကြောင်နဲ.ကျနော့်ကိုမေးငေါ့တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့လေ။
စိတ်မသက်မသာမျက်နာနဲ.ကိုရွှေဘက ဆက်ပြောတယ်။ မင်းတို.ကတော့ငယ်သေးတော့ဘယ်မှတ်မိမလဲ။ ဟိုကောင်ဖိုးသက်ကတော့ သိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပီပြောပြလိုက်တော့ကွာ။
အဲ့ဒီကမ်းနားလမ်းမုန်.တီဖိုကအလတ်မဆိုတာ မွေးကထဲက ကျပ်မပြည့်ဘူးလေ..ဟားဟား.. ပီးတော့လင်တရူးလိုလိုဘာလိုလိုနဲ.ငါတို.ငယ်ငယ်ကမြို.ထဲမှာ အဝတ်မပါပဲလျှောက်လျှောက်
ပြေးနေလို.လိုက်လိုက်ဖမ်းရတဲ့ဟာမျိုးကြီး။ တော်တော်ပေါက်ကရပြောတဲ့ကိုရွှေဘ..နန်းကြာဖြူက ဆံပင်ဖားလျားလေးချလို.တဲ့ … ဟိုအရူးမကဖြင့်ဆံပင်ကကျို.တို.ကျဲတဲ..ရှောက်ပန်းသီးအ
ငယ်စားလောက်ရှိတဲ့နို.ကြီးတွေတဲ့..ဟိုကဖြင့်ပိန်ကပ်ကပ်ကြီး..ခွိခွိ.. ပီးတော့ဘာတဲ့နှာတံချွန်ချွန်လေးတဲ့ ဟားဟား.. မွေးရာပါနှာခေါင်းအထဲကိုခွက်နေတာဟေ့။ ဘယ်လောက်များမူးနေခဲ့လဲ
ဟားဟားဟားဟား!! !! (အားလုံးပတ်ထုတ်မရအောင်ရယ်ကုန်ကြတယ်)
စစချင်းတော့အဲ့ဒီကောင်မလှေခါးကနေပြေးဖက်တာ ငါလည်းကြောင်နေတာဟေ့။ မင်းတို.ပြောသလိုပဲ..နန်းကြာဖြူများဝင်ပူးသလားပေါ့.. ဘယ်ဟုတ်မလဲ.. သူ.လက်တွေကငါ့ဂွေးကိုဖမ်း
ကိုင်ပီးမောင်တော်ရေ..မောင်ရေလို. တစာစာပြောမှ ဟိုက်! ဒါဟိုနေ.ညကငါတွယ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုတာသေချာသွားလို. အတင်းရုန်းမုန်.တီဖတ်ခြင်းလေးပြေးကောက်ကိုင်ပီး လစ်တော့တာပေါ့ကွာ။
လူကိုမှရှက်လိုက်တာ။ မတော်တဆဒီကောင်မ ပြောတာတွေအဟုတ်ပါဆိုတာ သူ.အိမ်ကလူတွေသိသွားလို.ကတော့ ငါ့မှာအရူးမလင်လုပ်ရမယ့်ကိန်းဟ!!
အဲ့ဒီညကသူ.အိမ်ကအလစ်မှာထွက်လာပီး ဘုရားငုတ်တိုမှာလာထိုင်နေပုံပေါ်ပါတယ်ကွာ.. ဒီနန်းကြာဖြူဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်း လူတိုင်းပြောဖူးတော့ ဒီအရူးမနန်းကြာဖြူဂိုက်ဖမ်းပီး ငါ့ကိုအုပ်
သူခြုံထားတဲ့ အဝတ်ဖြူဆိုတာကြီးကလည်းနောက်မှငါပြန်တွေးမိတာ မုန်.တီစစ်တဲ့အခါဇကာလုပ်တဲ့ အဝတ်စအဖြူကြီးပါ..ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညက ငါ့စိတ်ထဲမှာ ဆန်အပုတ်ခံတဲ့အနံ.ရနေပါလားလို. ဟီးဟီး..
အားလုံး တဝါးဝါးပွဲကျနေကြတာရပ်သွားတော့.. ကျနော်ကစကားစလိုက်တယ်။ စပြောလိုက်ရင်တော့အဟုတ်ကြီး ငါတို.ကိုရွှေဘကတော့နောက်ဆုံးကျရင် အဖျားရှူးရှူးသွားတာ။ ကျနော်တို.
မှာဖြင့်ဥစ္စာစောင့်မလေးကို တွယ်တဲ့အခန်းပြောနေတုံးကဖီးလ်တွေတက်လိုက်ရတယ်။ မမိုက်ပါဘူး.. ဟိုဟာဗျာ..အမှန်ကန်ဇတ်လမ်းလေးပြောပြ။
ကိုရွှေဘနဲ.မမိချိုလေးတို. ဇတ်လမ်းလေဗျာ.. အဲ့ဒါကတော့ကျနော်တစွန်းတစသိတော့ အဖျားမရှူးဘူး.. လုပ်ပါဗျာကိုရွှေဘ..
တော်ပီကွာ!! မိုးချုပ်နေပီပြန်အိပ်တော့မယ် နားထောင်ချင်ရင်နောက်နေ.မှ..
ဒီနေ.ရပ်ကွက်ထိပ်ကမီးကင်းတဲမှာလူတော်တော်စည်ကားနေကြတယ်ဗျ။ နှင်းကျသံတဖျောက်ဖျောက်ကြားထဲမှာ လူငယ်တွေတရုန်းရုန်းပဲ။
ထုံးစံအတိုင်းဖိုထားတဲ့ မီးဖိုကြီးကိုဝိုင်းထိုင်လို.ပါးစပ်တပြင်ပြင်လုပ်နေကြတယ်။ ၃ချောင်းထောက်နှစ်ခုကိုတန်းထိုးပီးတော့ မီးဖိုပေါ်မှာအလှူတွေမှာဟင်းရည်လိုက်တဲ့ချိုင့်အကြီးကြီးနှစ်လုံးကိုတင်
ထားတယ်။ ချိုင့်အကြီးကြီးတွေထဲမှာကျနော်တို.လူငယ်တွေကြိုက်တတ်တဲ့အထူးဟင်းပေါင်းဗျ။ အရပ်ဒေသအလိုက်ရှိကြတဲ့ရိုးရာအစားအစာပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုဗျ.. ဒီနေ.ရပ်ကွက်ထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်
တစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့ဒီခေတ်က ဗမာပြေကြီးချမ်းသာနေသေးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာအလျှံပယ်ကျွေးတာကိုး။ ထမင်းနဲ.ဟင်းအဝတစ်မြို.လုံး မီးခိုးတိတ်လေဗျ။ ဝက်ကို၁ဝကောင်၊
ကြက်အကောင်၈၀၀၊အဲ့လိုတွေကိုး။ ဟင်းတွေကလည်း၈ယောက်ထိုင်စားပွဲမှာ ထမင်းပန်းကန်ချစရာနေရာမရှိအောင်စုံလင်နေတာပဲ။ ထားပါတော့ဗျာ.. ခုပြောတဲ့ဟင်းပေါင်းဆိုတာက..မျက်လုံး
ဖုတ်ထောင်းအစရှိသဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်မှာဧည့်ခံသမျှကိုဝေစုပေးရတာထုံးစံပေါ့လေ။ အဲ့ဒီဝေစုတွေကို မိုးပြဲဒယ်ကြီးထဲအကုန်သွန်ထည့်ပီး မီးပြင်းပြင်းနဲ.ကျိုတာကိုဟင်းပေါင်းလို.ခေါ်တယ်ဗျ။
ခုမီးဖိုပေါ်တင်ထားတာအဲ့ဒါတွေဗျ။ မစားတတ်တဲ့ခင်ဗျားတို.အတွက်တော့ ရွှံစရာလို.ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို.အရပ်က လူငယ်တွေအတွက် ခုခေတ်ခင်ဗျားတို.ကြိုက်လှပါချေရဲ.ဆိုတဲ. KFCတို.၊ McDonald: တို.နဲ.ဆယ်ခါပြန်မလဲသေးဘူးဗျ။
ပီးတော့ဒီဟင်းပေါင်းဆိုတာ လူငယ်သီးသန်.အတွက်ပဲဗျ။ အိမ်ထောင်ရှင်တွေ၊လူကြီးတွေမပါရဘူးလို. သူ.အလိုလိုကိုသတ်မှတ်ပီးသား။
ဒီနေ.ညတော့ ဆောင်းတွင်းနှင်းဖွေးဖွေးကြားမှာ ရေနွေးခါးပူပူလေးရယ်၊ ဟင်းပေါင်းကိုဇလုံလေးတွေကိုယ်စီနဲ.လွေးဖို.ပြင်နေကြလို. အလိုလိုအူမြူးနေကြတာပေါ့လေ။ ကဲ..စကြစို. ရနေပီဆို
တာနဲ.သူ.ထက်ငါဇလုံလေးတွေ ထိုးခံနေကြတာ ဆူဒန်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဂျုံဆန်ပြုတ်ရဖို.လုနေကြသလိုပဲဗျ။
အသားဖတ်များများပါတဲ့ဇလုံအပြည့်ဟင်းပေါင်းတစ်ခွက် ပြင်ပါ နံပါတ်ဝမ်းကြီးလာနေပါတယ်.. ဆိုတဲ့အသံနဲ.အတူ ကျနော်တို.လူအုပ်ထဲလူတစ်ယောက်ဝင်ထိုင်လိုက်တာမြင်တော့အား
ဟာ!! ကိုရွှေဘ လာပြီ.. (နံပါတ်ဝမ်းကြီးဆိုတာ အဲ့ဒီခေတ်ကဘယ်သူ.ကိုခေါ်သလဲသိတယ်နော်)
ကဲ..ငါတို.အကိုကြီးအတွက်လုပ်စမ်းဟေ့..အသားဖတ်များများ ဟင်းပေါင်းခပ်ပျစ်ပျစ်လေးခတ်ပေးလိုက်စမ်း.. လုပ်လုပ်.. ကိုရွှေဘ..ရော့ရေနွေးလေးအရင်မှုတ်သောက်ထား…
သူ.ကိုအားလုံးကပျာပျာသလဲလုပ်ပေးနေတာကိုကြည့်ပီးထုံးစံအတိုင်းတဟဲဟဲနဲ. ရွှေသွားတဝင်းဝင်းပေါ်အောင်ရယ်နေ ရင်းကိုရွှေဘတစ်ယောက်သဘောတွေကျလို.ပေါ့။
အားလုံးတဟူးဟူးတဟဲဟဲနဲ.ဗိုက်ကားအောင်စားသောက်ကြပီး အိုးတွေခွက်တွေကို သိမ်ဆည်းပီးမှ ရေနွေးကြမ်းမတ်ခွက်ကြီးတွေကိုယ်စီိကိုင်၊ မင်္ဂလာဆောင်ကဝေတဲ့ ဒူးယားစိမ်းလေးတွေ
ကိုရွှေဘ.. ကျနော်တို.ကလေးဘဝကဘယ်ပျောက်သွားတာလဲဗျ.. မြင်ကိုမမြင်ဖူးခဲ့တာ…
အင်း.. နာမည်သိပ်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ကျောက်သွားတူးတာဟ..၄-၅နှစ်လောက်ကြာတယ်.. (ဒူးယားစိမ်းလေးနဲ.ဇိမ်ယူနေတဲ့ကိုရွှေဘကပြန်ဖြေတယ်)
ကိုရွှေဘမြို.ကိုပြန်ရောက်လာတော့ .. ကျနော်တောင်လူပျိုပေါက်ရှိပီနော့ (ကျနော်ဝင်ပြောလိုက်တယ်)
ဟုတ်ပါ့.. မင်းတို.မြစ်ထဲရေချိုးနေတာ..ငါနဲ.တွေ.တဲ့နေက ငါပြန်ရောက်လာတဲ့နေ.ပေါ့.. ဖိုးသက်ရ !!
ဖွီးးးးး!! (ကျနော်ထပီးရီလိုက်လို. ရေနွေးကြမ်းတွေသီးကုန်တယ်)
အားလုံးက ကျနော့်ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ ဒီတစ်ခါဘာဖြစ်ပြန်ပီလဲပေါ့။ ကျနော်က တခွိခွိလုပ်နေရင်း အားလုံးကိုလက်ကာပြပီး။
ဟီး.. ခုမန်းလေးမှာပွဲရုံ ပိုင်ရှင်နဲ.ရသွားတဲ့ မမိချိုလေးနဲ.ကိုရွှေဘရဲ. ဆွတ်ပျံ.ဖွယ်အချစ်ဇတ်လမ်းက အဲ့ဒီနေ.မှာစတာလေ..
ချီး! နေဦးငါဗိုက်နည်းနည်းတင်းနေတယ်.. အဲ့ဒီဇတ်လမ်းအစက မင်းလည်းရေချိုးဆိပ်မှာရှိနေတာပဲ.. မင်းအရင်စပြောပြလိုက်..မင်းမသိတဲ့နောက်ပိုင်းဇတ်လမ်းရောက်မှငါဆက်ပြောမယ်.
မင်းတို.သိတဲ့အတိုင်း ကိုရွှေဘဆိုတာ အရာရာနဲ.အကြောင်းကြောင်းမလား…
မိုးတွင်းဆိုရင်ငါတို.မြို.ဘေးကမြစ်ကရေတွေအတော်တက်လာတာမလား။ ခါတိုင်းဆိုရင်ရေကကမ်းပါးအောက်ပေ၅၀-၆ဝလောက်ရှိနေရာက နေရေတက်လာတော့ကမ်းပါးအောက်ပေ၂၀-၂၅
လောက်ပဲမြင့်တော့တာကိုး။ အဲ့ဒီခေတ်က ခုလိုဘုံဘိုင်တွေ၊ အဝီစိတွေမပေါ်သေးတော့ကာ..တွင်းရေကိုသောက်ဖို.သုံးဖို.လောက်ပဲတစ်မြို.လုံးသုံးကြပီး၊ လူကြီးလူငယ်မှန်သမျှဆိုတာမြစ်ထဲ
ရေချိုးဆင်းကြရတာကိုးဟ။ မိုးတွင်းရေတအားတက်လာပီဆို ရေချိုးဆိပ်ကအဆင်မပြေတော့ဘူး။ ကမ်းနားမှာဟိုးအောက်ပြေအောက်ရွာကိုစုန်ဆင်းဖို.လာကပ်ထားတဲ့ဝါးဖောင်တွေရှိတယ်။
လူတွေက အဲ့ဒီဝါးဖောင်တွေပေါ်တက်ပီး ခွက်ကလေးတွေနဲ.ခပ်ချိုးရတာပေါ့လေ..ငါတို.ချာတိတ်တွေကျတော့ ကမြင်းကျောကထထရယ်။ အဲ့လိုရေတက်လာတဲ့အချိန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်
ပီးသား။ သူများရပ်ကွက်ကဓာတ်မီးတိုင်မှာ တိုင်မယိုင်အောင်ထိန်းထားတဲ့ လက်ညိုးအလုံးလောက်ရှိတဲ့ သံမဏိဝင့် ကြိုးကိုညဖက်သွားပီးဖြုတ်ခိုး။ ကားတာယာအဟောင်းတစ်ခုလောက်..
ဝပ်ရှော့ကသွားတောင်းပီး ဓါးထက်ထက်နဲ. လက်ကိုင်လို.ကောင်းတဲ့အကွင်းအရွယ်ထိဖြစ်အောင် ၀ိုက်ပီးလှီး။ မြစ်ကမ်းပါးထိပ်က မြစ်ဘက်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့ ကုက္ကိုပင်ကြီးရဲ.အကိုင်းမှာတက်
ပီးသေချာချည်လိုက်ရင်ငါတို.ဆော့ကစားစရာ၊ရေထဲကိုဒန်းလွှဲသလိုလွှဲစီးပီးဒိုင်ပင်ပစ်လို.ရတဲ့ ဒိုင်ပင်စင်ရပီပေါ့လေ။ အရှိန်နဲ.ကမ်းပါးကနေရေထဲကိုလွှဲစီးသွားပီး တော်တော်ဝေးဝေးရောက်မှ
ရေထဲကိုဒိုင်ပင်ပစ်လိုက်၊ ဂျွမ်းထိုးချလိုက်နဲ. ကမြင်းကျောထကြတာပေါ့လေ။ ဒီအလေ့အထကငါတို.မြို.ရဲ.အစဉ်အဆက်လို.လဲလူကြီးတွေက ပြောဖူးတယ်ဟ။ ရေချိုးဆိပ်လုပ်ထားတဲ့ဖောင်တွေ
က ငါတို.ဆော့နေတဲ့ကမ်းပါးအောက် ၀ါးတရိုက်လောက်မှာပေါ့။
အဲ့ဒီနေ.က ငါတို.ချာတိတ်၃-၄ကောင် အဲ့လိုကမြင်းနေကြတာပေါ့။ ရေချိုးဆိပ်ဖောင်ပေါ်မှာတော့ ရပ်ကွက်ထဲက အသက်၂၅လောက်(အဲ့ဒီတုံးက)ရှိတဲ့ မမိချိုလေးတစ်ယောက်ထဲထမီရင်
ခေါင်းလျားနဲ. အဝတ်တွေလျှော်ဖွတ်နေတာ။ တချက်တချက်ငါတို.ကို ဟဲ့ကလေးတွေ.. ကမြင်းကြောကိုထလှချေလား.. ဘာညာနဲ.လှမ်းလှမ်းပီးအော်နေသေးတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ…
ငါတို.ဆော့နေတဲ့ကမ်းပါးနား ကို အမှိုက်ပစ်တဲ့တွန်းလှည်းလေးတွန်းပီး ကိုရွှေဘရောက်လာတာဟေ့။ အင်းကျီဗလာနဲ. ဝက်ဝံတံဆိပ်ပုဆိုးအဝါကို တိုတိုဝတ်ထားတယ်။ အမှိုက်တောင်းတွေမြစ်
ထဲသွန်ပီးတာနဲ.ငါတို.နားလာပီးအာလာရိုက်တော့တာပေါ့.. မင်းတို.ဘယ်သူ.ကလေးတွေလဲဘာညာတွေနဲ.ပေါ့လေ.. ဟဲဟဲ..ငါတို.ကိုအာရိုက်နေရင်းဖောင်ပေါ်က မမိချိုရဲ.ရေစိုစိုထမီရင်ခေါင်း
လျားအလှကိုလှမ်းလှမ်းပီးဂလုရင်းပေါ့… … …. … ….
အဲ့လိုငါတို.ကိုအာရိုက်တယ်ဆိုတာကလည်း ငါတို.အပေါ်အာရုံရှိပုံမရပါဘူးလေ။ ဖောင်ပေါ်ကမမိချိုလေး မကြားကြားအောင်အသံတစာစာ နဲ.လုပ်နေတယ်ဟီးဟီး..
သူ.ကိုယ်သူငါတို.ရပ်ကွက်ထဲကတရုတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ကိုရွှေဘပါဆိုတာမိတ်ဆက်ရင်း.. ငါတို.ကမြင်းကြောထနေတဲ့ကိစ္စကိုပါဝင်ပီးစွက်ဖက်လာရောဗျ။ ဟာ..မင်းတို.ကောင်တွေဒိုင်ပင်ပစ်
တာမလှပါဘူး..ငါတို.ကောင်တွေငယ်ငယ်ကဆိုဘယ်လိုဘာညာတွေပေါ့လေ။ ပြောရင်းနဲ.စိတ်ပါလာတာလား မမိချိုလေးကလှမ်းလှမ်းကြည့်နေတော့ အစွမ်းပြချင်တာလားမသိပါဘူး။ သူ.ပုဆိုးအဝါလေးကိုခါးတောင်းကောက်ကျိုက်လိုက်ပီး ကမ်းပါးပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်လျှက်ကနေ.. ဟိုင်း!! ဆိုတစ်ချက်အော်လိုက်ပီး နောက်ပြန်တစ်ပတ်ဂျွမ်းခုတ်ပြလိုက်သေးတယ်။ အမယ်..ဟုတ်
တော့ဟုတ်တယ်ဗျ။ နေရာတောင်မရွေ.ဘူးလှလိုက်တဲ့နောက်ပြန်တစ်ပတ်ဂျွမ်းလေး။ ငါတို.ကရေထဲကိုသာဂျွမ်းထိုးရဲတာ အဲ့လိုကြီးကတော့ မြေကြီးပေါ်မှာမလုပ်ရဲဘူး..အကျမတော်ရင်ဇက်ကျိုးမဲ့
အပေါက်လေ။ နောက်မှသိရတာ ကိုရွှေဘက သိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာကြီးကိုး။(ကိုရွှေဘတဟဲဟဲရယ်နေတယ်)
အင်း..ဒီကထဲက မမိချိုက ကိုရွှေဘကိုသဘောကျချင်နေတာလားတော့မသိဘူးလေ.. ငါတို.တွေ.စကကိုရွှေဘ ဘော်ဒီကောရုပ်ကော ကွန်ဖူးမင်းသားဘရုစ္စလီ စတိုင်ကိုးဟ။
အဲ့ဒါဖောင်ပေါ်ကနေ အဝတ်တွေသာလျှော်နေတာ အင်းကျီချွတ်၊ပုဆိုးခါးတောင်းကျိုက်ထားတဲ့ ကိုရွှေဘကိုလှမ်းလှမ်း ကြည့်နေတာကိုး။ အဲ့လိုတွေ အခြေနေကောင်းနေတော့ကိုရွှေဘက အစွမ်းတော်တော်ပြချင်လာပုံပေါ်တယ်ဟီးဟီး။ သံမဏိဝင့်ကြိုးနဲ.လုပ်ထားတဲ့ဒီဒန်းကြိုးကိုလွှဲစီး ပီးလေပေါ်ဝဲ၂ပတ်ဂျွမ်း ထိုးပြမယ်ဆိုပဲ၊ ရေထဲကိုနော်။ မင်းတို.ကြည့်ထားကြ.. ဘယ်လိုထိုးရ
တယ်ဆိုတာဆိုပီး အော်ပီးပြောလိုက်သေးတယ်..မမိချိုလေးမကြားကြားအောင်ပေါ့လေ။ အင်း..ဟိုကလည်းလှမ်းကြည့်နေပီဆိုတော့ ကဲချပေါ့လေ.. လက်ကိုင်ကွင်းလုပ်ထားတဲ့ ကားတာယာ
ကိုလက်၂ဖက်နဲ.စုံကိုင်.. အရှိန်များအောင်ဆိုပီး ငါတို.ချာတိတ်တွေက သူ.ခါးကိုဖက်ပီး အနောက်ကိုအားနဲ.ဆွဲမြှောက်၊ ပီးမှ ဝမ်း..တူး..သရီး ဆိုပီးတွန်းလွှတ်လိုက်တာပေါ့။
ယားးးး!! ဆိုပီးအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ.ခိုစီးပီး လွှဲသွားတာ.. ကမ်းနဲ.အဝေးဆုံးအမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားမှ လက်ကိုလွှတ်ပီး လေပေါ်မှာလှည့်ပတ်ပလိုက်တာ ၂-၃ပတ်လောက်ဗျ.. လှချက်က..
နောက်ဂျွမ်းထိုးတာဒီလောက်လှတာငါတော့မမြင်ဖူးဘူးဟေ့။ ဒါပေမယ့်..ကံမကောင်းဘူး။ ရေထဲကိုမတ်တပ်လေးကျသွားရမှာ..ဟိုကားတာယာကြီးက အရှိန်တအားပြင်းတော့ ကိုရွှေဘပြန်ကျ
လာတဲ့အချိန်ထိ လေထဲမှာ အကွင်းလိုက်ကြီးကျန်နေတော့ကာ လေထဲကနေဂျွမ်းထိုးပီး အောက်ကျလာတဲ့ သူ.ကိုယ်လုံးကပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကားတာယာထဲစွပ်ဆိုတည့်တည့်ဝင်သွားရော။
ဂျိုင်းကြား၂ဖက်နဲ.ကွက်တိချိတ်..ကားယားယားကြီး ကမ်းပါးကိုအရှိန်နဲ.ပြန်ပါလာတာဟေ့။ ဝီးကနဲ..လွှဲလာတဲ့အရှိန်နဲ.ကမ်းပါးကိုပြန်ကပ်လာတော့ ငါတို.ကောင်တွေလည်းဟာ.. ဆိုပီးရှောင်
ရတော့တာပေါ့။ အင်း..ကုက္ကိုပင် ပင်စည်ကြီးကိုဝင်ဆောင့်လိုက်တာများ အုတ်နံရံကို ဂျစ်ကားဝင်ဆောင့်သလာမှတ်ရတယ် အုံးးး !! ဆိုပီးအကျယ်ကြီးပဲဗျ။ ဝင်ဆောင့်ပီးတာနဲ.အရှိန်မသေဘူးလေမြစ်ဖက်ကို လည်လည်လည်လည်နဲ.ပြန်လွှဲပါသွားရော။ နာရီချိန်သီးလို အရှိန်မသေမချင်း လွှဲနေသေးပေမယ့်..ငါတို.ကမ်းပါးပေါ်ကနေ လှမ်းပီးဖမ်းဆွဲ
ဖို.ကိုမမှီတော့တာ။ ရပ်သွားတော့မှကြည့်လိုက်တော့..ကိုယ့်ဆရာခမျာ ကုက္ကိုကိုင်း အစွန်းအောက်တည့်တည့်မြစ်ရေပြင်ပေါ်က လေထဲမှာကြိုးတန်းလန်း ကားတာယာကွင်းလေးထဲမှာစွပ်လျှက်
ကလေး ပုဆိုးကလည်း ဘယ်ချိန်ကျွတ်ကျသွားတယ်မသိဘူး။
မမိချိုလေးက ရေထဲကိုမျှောလာတဲ့သူ.ပုဆိုးကိုဖောင်ပေါ်ကနေဆယ်ပေးနေတယ်။ ငါတို.ကောင်တွေကကမ်းပါးပေါ်ကနေ ဗိုက်နှိပ်ပီး ရယ်နေကြတာခွက်ထိုးခွက်လှန်ပေါ့လေ။ နောက်မှသတိရ
တာနဲ.ကြိုးကိုအဲ့လိုအရှိန်သေသွားတိုင်းလှမ်းဆွဲတဲ့ ချိတ်တပ်ထားတဲ့ဝါးလုံးရှည်နဲ.အသာလေးထိန်းပီး ကမ်းပါးကိုဆွဲယူလိုက်ရတာပေါ့။ ကမ်းပါးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပီးတော့ ကိုယ့်ဆရာက မထနိုင်
ရှာဘူးဖင်တုံးလုံးလေး မြေကြီးပေါ်ခွေပီး တအင်းအင်းညည်းနေတာပေါ့။ ဒါနဲ.ငါတို.ချွတ်ပုံထားတဲ့ပုဆိုးတစ်ထည်ဝတ်ပေးပီး သူအမှိုက်လာပစ်တဲ့တွန်းလှည်းပေါ်တင်ပီး အိမ်ကိုတွန်းပို.လိုက်ရ
တယ်။ သူ.အိမ်ရောက်တော့ သူအဖေတရုတ်ကြီးက ဟာ..မီးမေရိုး ဒီလောက်ကမြင်းတာ အိမ်ပြန်လာပို.သေးတယ်..မြစ်ထဲတခါလဲမျှောလိုက်ပါလားတဲ့.. ဟားဟား။
အဲ့ဒီမှာ ကိုရွှေဘကျွတ်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ သူ.ပုဆိုးလေးက ခုပြောမယ့်အချစ်ဇတ်လမ်းရဲ.အစပေါ့လေ။ ကဲ..ကိုရွှေဘအလှည့်.. ပြောတော့ဗျာ!!
အင်း.. ဖိုးသက်ပြောတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပီးတော့ ငါလည်းရှက်ပီး အပြင်မှာမိချိုနဲ.မျက်နာချင်းတောင်မဆိုင်ရဲတော့ဘူးဟေ့…
ဒါပေမယ့်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ငါလည်းမြစ်ထဲကဖောင်ပေါ်ရေချိုးဆင်းတော့ ဖောင်ပေါ်မှာ အဝတ်လျှော်နေတဲ့မိချိုနဲ.၂ယောက်ထဲကြုံပါရောလားကွာ။ လူကလည်းအဲ့ဒီနေ.ကညနေနေဝင်
ရီတရောမှာဘယ်သူမှကိုမရှိပဲရှင်းနေတာကိုးဟ။ ဖောင်ပေါ်မှာ ငါနဲ.မိချိုနဲ.၂ယောက်ထဲပေါ့လေ.. မှောင်ကလဲမှောင်စပြုလာပီ.. … … … … … …
ခုနက တဟားဟားရယ်နေတဲ့ပရိတ်သတ်က တိတ်သွားကြပြန်ပီ။
မှောင်ရီပျိုးစ မှာလူသူရှင်းတဲ့ရေချိုးဆိပ်မှာ ငါတို.လူနဲ.မိချိုလေး၂ယောက်ထဲဖောင်ပေါ်မှာတွေ.ကြပီပေါ့လေဆိုပီး မျက်စိထဲမြင်ယောင်ကြည့်ရင်း ရင်ဖိုလာကြပီပေါ့ဗျာ။ ထုံးစံအတိုင်းပဲဆရာသမားက စပြောပီဆိုတာနဲ. အမူအရာလေးတွေနဲ.မာန်ပါပါစပြောတော့မယ့်ပံကိုး။ သောက်လက်စ ဒူးယားစိမ်းကိုတောင်မီးဖိုထဲပစ်ထည့်လိုက်ပီး အဟမ်းဟမ်း..ဆိုပီးလည်ချောင်းတွေဘာတွေရှင်းလိုက်သေးတယ်။ပီးမှာ မီးပုံကိုဝိုင်းထိုင်နေတဲ့ လူတွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှု အပြည့်ရှိရလားပေါ့လေ။အားလုံးကငြိမ်ပီး
မိချိုလေးဆိုတာမင်းတို.ထဲကတချို.ကောင်တွေမမြင်ဖူးတော့ ပြောပြဦးမယ်။ တစ်တစ်ရစ်ရစ်ကလေးဟ.. ငါးရံ.ကိုယ်လုံးလေး..ပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်က အသက်၂၅တောင်မပြည့်တပြည့်ဆိုတော့
ရေဆေးငါးကစ်ကစ်လေးပေါ့။ ငါမြို.ကနေထွက်မသွားခင်တုံးကတော့ ငယ်သေးတာရယ်၊တရပ်ကွက်သားချင်းတွေဆိုတော့ ငါသိပ်စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး။ ပြန်ရောက်ပီးအဲ့ဒီနေ.ကမှ ရေချိုးဆိပ်မှာငမ်း
မိတော့မှတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားလာတာဟ။ ဒီကောင်မကလည်း ဟိုနေ.ကသူ.ရှေ.မှာဂွေးတန်းလန်းဖြစ်ထားတော့ လမ်းမှာငါ့မျက်နာတွေ.တာနဲ.တခွီးခွီးရယ်တတ်တော့ ငါလည်းရှက်တာပေါ့
လေ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွေ.အကြုံအရပြောရရင်သူငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှန်းငါသိပါတယ်။ အဲ့ဒီခေတ်ကမင်းတို.ခုခေတ်လို ဂစ်တာလေးတဒေါင်ဒေါင်ခေါက်တတ်မှစော်ကြည်တဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူး။(ကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်ပီးနှိပ်လိုက်သေးတယ်) ဖိုက်တာမှစော်ကြည်တာဟေ့။ တစ်ခုခုဆိုလက်မြန်ပီး မိုက်တိမိုက်ကန်းဆို ဘယ်လိုခေါ်မလဲ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ခေတ်ကိုး။ မင်းတို.သိတဲ့အတိုင်းငါကလည်း နာမည်ကြီး၊လူတိုင်းသိတဲ့ အပြင်အဲ့ဒီတုံးကလည်း ဘော်ဒီကမိန်းမကြိုက်လေ..မယုံရင်ဖိုးသက်ကိုမေးကြည့်.. …
ဟီးဟီး .. ဟုတ်ပါ့ဟုတ်ပါ့ ဘရုစ္စလီပါဆိုနေမှ.. (ကိုယ်ရည်သွေးမှန်းသိသိကြီးနဲ.ပင့်ပေးနေရတာ၊ ဆက်ပြောအောင်လို.ဒါမှအညှီအဟောက်လေးတွေကြားရမှာလေ)
ဒါနဲ.ဖောင်ပေါ်ကိုခပ်ကုတ်ကုတ်လေးတက်ပီး မိချိုနဲ.ဝေးတဲ့အစွန်ကိုသွားပီး ရေကိုခွက်ကလေးနဲ.ခပ်ချိုးနေတာပေါ့လေ။ မိချိုကတော့လျှော်ဖွတ်ရေညှစ်ပီးတာတွေဇလုံထဲထည့်နေပီ။ ပြန်တော့
မလိုလိုလုပ်ရင်းငါ့ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်နေတာပေါ့။ လူသူလေးပါးမရှိတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ကြိတ်ကြိုက်နေတဲ့မိန်းမနဲ.၂ယောက်ထဲရှိနေရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲမင်းတို.ဖာသာတွေးကြည့်လေ။
မိချိုကရေချိုးပီးပီနေမှာဟ။ ထမီရင်ခေါင်းလျားကို ပြင်ဝတ်ပီး ရင်ဘတ်အပေါ်ပိုင်းကိုတရုတ်တဘက်နဲ.သိုင်းခြုံလိုက်ပီး ဇလုံကိုမရင်းမတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ ငါလည်းအသာလေးခိုးကြည့်
ရင်းဟာပြန်တော့မယ် သွားပါပီပေါ့လေ။ ကံကောင်းချင်တော့.. အဲလေကံဆိုးချင်တော့ဝါးဖောင်တွေက၂ပေလောက်စီတစ်တွဲ တွဲချည်ထားတာဆိုတော့ အဝတ်ဇလုံကြီးမပီး ထရပ်လိုက်တဲ့မိချို
ရဲ.ခြေထောက်တစ်ဖက်က ခြေချော်ပီး ဖောင်၂ခုတွဲထားတဲ့ကြားထဲကျွံကျသွားပါလေရော။ ဝုန်းဆိုကျသွားတာ.. ငါလှမ်းကြည့်တော့ သူ.ပေါင်တံတစ်ဖက်ကဖောင်၂ခုကြားထဲညှပ်နေပီဟ။
ငါ့ကိုလည်း အော်တယ်.. အမလေး!! ကိုရွှေဘလုပ်ပါဦးရှင်တဲ့..ငါလည်းနဂိုကကိုပြန်မှာစိုးနေပါတယ်ဆိုမှတော့ သူ.ဆီပေးသွားတာပေါ့လေ။ အနားကိုရောက်သွားပီး ပေါင်အရင်းထိကျွံနေတဲ့
မိချိုပုခုံးလေးကိုထိန်းပီးဖေးထားပေးရင်း ရလားမိချိုလေးဘာညာဆိုပီးသူ.ကိုကူဖို.လုပ်တာပေါ့လေ။ ခုနက နည်းနည်းမှောင်ရီပျိုးစဆိုတော့လှမ်းမမြင်လိုက်ရလို.ဟ။ အမှန်က သူကျွံကျတဲ့အခါ
ရင်ခေါင်းလျားထားတဲ့ ထမီကကျွတ်သွားပီ။ ရင်ဘတ်ကိုပတ်ထားတဲ့တဘက်လည်းလွင့်သွားပီး ကော့ကော်ကံကားကြီး ညှပ်နေတာပေါ့။ ငါလည်း သတိမထားမိပါဘူး။ ညှပ်နေတဲ့သူ.ခြေထောက်တစ်ချောင်း ကိုဆွဲထုတ်ဖို.ကူပေးဖို.ပဲအာရုံရောက်နေတာကိုး။ နည်းနည်းလေးဖောင်၂တွဲကိုခြေထောက်နဲ.ကန်ပီးချဲ.. ပေါင်ရင်းဂွဆုံနားထိကျွံနေတာကိုဆွဲနှုတ်ပေးဖို.
ကြိုးစားတော့မှသတိထားမိတယ်။ မိချိုရဲ.ထမီက ခါးအထိလျှောကျနေတာလေ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲထုတ်ဖို.ကိုင်ထားတဲ့ငါ့လက်မောင်း၂ဖက်ကအိအိလေးပါလားဆိုပီးသတိထားမိလို.
အသာလေးကြည့်လိုက်မှမိချိုလေးရဲ. နို.တွေနဲ.ငါ့တထောင်ဆစ်တွေနဲ.ပွတ်မိနေတာကိုး။ သူ.ကိုကြည့်လိုက်တော့ ကိုရွှေဘဖြေးဖြေးဆွဲနော်လို.ပြောပီး နာလို.လားရှက်လို.လားမသိဘူး။ မျက်နာ
ကိုတခြားဖက်လွှဲပီး အံကြိတ်ထားတာတွေ.ရတယ်။ ငါလည်းဘယ်ရမလဲ..ချက်ချင်းဖောင်တွဲတွေကိုခွါပလိုက်ပီး ဆွဲထုတ်လို.ရတာကို… မိချိုလေး ကိုရွှေဘ နည်းနည်းလေးဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်နော်။ နာရင်ပြော..ခြေထောက်ညှပ်ထားတာ..၀ါးတွေလည်းရှမှာစိုးတယ်ဆိုပီး သူ.ပေါင်လုံးအိအစက်စက်ကြီးကို ကိုင်ပီး ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲထုတ်ပေးနေတာပေါ့
လေ။ အဟီး ပေါင်ကိုကိုင်ရုံလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးဆရာ။ တတောင်ဆစ်နဲ. သူ.နို.တွေကိုလည်းဖိဖိပီး ချေရင်းဇိမ်ခံနေလိုက်သေးတယ်။ အဲ့လိုတစ်ထစ်ချင်း ဆွဲထုတ်လိုက် ပေါင်ပွတ်လိုက်
နို.တွေကိုမထိတထိလုပ်လိုက်နဲ.တော်တော်လေးကြာကြာ လုပ်နေတော့ မိချိုကလည်းရိပ်မိလာတယ်ဟ။ ကိုရွှေဘ..မိုးဖွဲလေးတွေကျလာပီမြန်မြန်ဆွဲထုတ်ပေးတော့လို. အံကြိတ်ထားတဲ့ရှက်နေ
တဲ့အသံနဲ.ပြောလာမှ..ငါလည်းဖောင်၂ခုကိုဆွဲဖြဲပီး တအားဆွဲထုတ်လိုက်တော့၂ယောက်လုံး အရှိန်လွန်ပီး ဖောင်ပေါ်မှာပက်လက်လှန်သွားကရောဟေ့။ မျက်စိထဲမြင်တယ်နော်… ခါးအထိလှန်
တက်နေတဲ့ထမီနဲ.ပက်လက်လှန်နေတဲ့မိချိုလေးပေါ်ငါက ဖိမိနေတာဟီးဟီး။ ချက်ချင်းမထပဲ..ငါလည်းမထူးပါဘူးဆိုပီး.. လူပျိုစကားပြောပလိုက်တယ်။ မိချိုလေးနင့်ကိုငါကြိုက်တယ်ဟာလို.။
ပက်လက်လှန်နေတဲ့မိချိုက.. အာကိုရွှေဘကြီးမကောင်းဘူး..ဖယ်ပါရှင်တဲ့။ ဒီလိုအခြေနေမှာ မင်းတို.ဆိုရင်ကောဖယ်ပေးမလားဟဲဟဲ။
အားလုံးပြန်မဖြေနိုင်ပဲခေါင်းခါပြကြတယ်။ တံတွေးတွေဘာတွေမျိုချကုန်ပီ။ သိတယ်မလား အကုန်လုံးကလူပျိုပေါက် အတွေ.အကြုံမှမရှိကြသေးတဲ့အရွယ်တွေဆိုတော့ဖီးလ်တွေဘာတွေတက်
နေပီလေ။ ဒီကြားထဲဆရာသမားရဲ.စကားပြောခြင်းအတတ်ပညာကလည်း ပီပြင်လွန်းနေတော့ ကိုရွှေဘနေရာမှာ ကိုယ်ပဲဖြစ်နေသလိုလိုခံစားပီး ကတုန်ကယင်တွေတောင်ဖြစ်ကုန်တယ်။ မင်္ဂလာ
ဆောင်ကအလကားရတဲ့ဒူးယားစိမ်းတွေဖိဖွာတဲ့ကောင်ကဖွာ၊ အေးစက်စပြုနေတဲ့ရေနွေးကြမ်းတွေကယောက်ကတမ်းမော့တဲ့ကောင်ကမော့တွေဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျနော်ဆိုရင်ရေနွေးသောက်
တာများသွားလို.ရှူးပေါက်ချင်နေတာတောင်အောင့်ထားတဲ့အထိဇတ်လမ်းက ကောင်းနေတာကိုးဟီးဟီး။ ရေနွေးတစ်ကျိုက်လောက်မော့၊ စီးကရက်လေးနည်းနည်းဖွာပီး ကိုရွှေဘဆက်ပြောတယ်။
မှောင်ရီဝိုးတဝါးလေးမှာ..မိုးတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ကကျလို.ပက်လက်လှန်ပီး ဝစ်လစ်စလစ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့မိချိုမျက်နာဝိုင်းဝိုင်းလေးကို ငါလည်း လက်နှေးလို.မဖြစ်ဘူးဟဲ့လို.ကိုယ့်ကိုကိုယ်
သတိပေးရင်း အာဘွားတွေရှလူးပလိုက်တာပေါ့ဟီး။ မိချိုကတော့ နည်းနည်းရုန်းတယ်ဟ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ဗလကြီးနဲ.အဖိခံနေရတော့ကာဘာမှမတတ်နိုင်ရှာဘူးပေါ့ကွာ။ ဖြေးဖြေးချင်းငြိမ်ကျသွားတာ
ပေါ့။ အဲ့ဒီတော့မှမင်းတို.အကိုကြီးရဲ.ပညာခန်းတွေပြရတော့တာဟ။ လည်တိုင်လေးတွေကိုမထိတထိနမ်း၊နမ်းရင်းနဲ.အောက်ကိုဆင်းပီး မိချိုလေးရဲ.နို.သီးလေးတွေကို လျှာဖျားလေးနဲ.သွားပီးကလိ
ပေးလိုက်တော့.. မိချိုက.. ကိုရွှေဘ..ကျမအဖေနဲ.တိုင်ပြောမယ်ဆိုပီးတွန်းတော့ပဲဟေ့။ ဘယ်ရမလဲကွ.. ငါလည်းမိချိုလေးရာ..နင့်အဖေငါ့ကိုသတ်ချင်သတ်ပါစေငါနင့်ကို ဟိုးနင်ငယ်ငယ်ကထဲက
ကြိုက်နေတာပါဟာဘာညာဆိုပီးချော့လိုက်၊ နို.တွေကိုတစ်ဖက်စီဟိုပြောင်းဒီပြောင်းစို.ပေးလိုက်တာ ဟဲဟဲ..ပြန်ငြိမ်သွားရော။ ငါကဒီလို အနူးအနပ်မှာဆရာကြီးဆိုတာ မင်းတို.နောင်တော်တွေသိပါတယ်။ တော်တော်လေးကြာလာတော့ ငါ့လက်တွေကိုအောက်ဖက်ကိုပို.ပီး မိချိုလေးရဲ.ေ-ာက်ဖုတ်လေးကိုလက်ခလယ်နဲ.မသိမသာဖတ်ကနဲလှမ်းစမ်းလိုက်တော့
ကိုရွှေဘ! ခုနကဖောင်ပေါ်က ချော်ကျတုံးက သူ.ေ-ာက်ဖုတ်ရေစိုနေတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား?(ဟားဟားဟား!! အားလုံးပွဲကျသွားတယ်)
အေပေးလေး.. မင်းရူးနေလား..ရေစိုတာနဲ. ဟိုဟာစိုတာတူမလားဟ.. အတွေးအခေါ်တွေကမပြောလိုက်ချင်ဘူး..ချီး..ငါပြောနေတာတောင်ဖီးလ်ပျက်တယ်။
ဘယ်ရောက်ကုန်ပီလဲ..အော..အေး..ငါလည်းသူ.အဖုတ်လေးကိုလက်ချောင်းလေးတွေနဲ.ရွရွလေးကစားပေးနေလိုက်တော့သူ.လက်၂ဖက်ကငါ့ဆံပင်ကိုစုံကိုင်ပီး .. ကိုရွှေဘကြီးမကောင်းဘူး
ဟာ..မိချိုနေရခက်လိုက်တာ..ဘာညာနဲ.နွဲ.လာပီ။ ဘယ်ရမလဲ..ရွှေဘဆိုတာေ-ာက်ဖုတ်မှော်အောင်ထားတာ၊သိမ်းလီရွာက ရှမ်းဘုန်းကြီးရဲ.ပီယဆေးတွေဘာတွေတင်ထားတာကိုး။
ဟ! မင်းတို.ကောင်တွေရယ်နေကြ.. ငါစော်ကြည်လားမကြည်ဘူးလားမင်းတို.အသိပဲလေ..(ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျ)
အေးအဲ့ဒါ..ငါခုနကပြောတဲ့ ရှမ်းဘုန်းကြီးက ကြေးစုတ်ကြီးနဲ.ပေါက်ပီး ပီယဆေးတင်ထားတာ။ ငါချာတိတ်ဘဝက သိမ်းလီရွာဖက်သွားရင်းထိုးလာတာဟ။ လွယ်တယ်မထင်နဲ.ဆေးဖိုး၈ဝဝမရှိ
လို.အိမ်ကငါ့အတယ်(သူ.အဖေ)ရဲ.ရလေးစက်ဘီးကြီးသွားခိုးပေါင်ပီးလိုက်သွားတာ။ ထိုးတဲ့လူတွေအများကြီးငါတစ်ယောက်ပဲဆေးအောင်တာ။ ပီယဆေးအောင်တဲ့ကောင်ကိုေ-ာက်ဖုတ်မှော်
အောင်တယ်လို.ခေါ်တယ်ဟီး။ ကဲ..အဲ့အကြောင်းနောက်မှငါသေချာရှင်းပြမယ်။ ဘယ်လိုဘာတွေနဲ.ထိုးရလဲဆိုတာနောက်နေ.မှရှင်းပြမယ်။ ခုဆက်ပြောရအောင်..မိချိုလေးနဲ.ကိစ္စ..
သူ.အဖုတ်ကိုလက်ချောင်းလေးတွေနဲ.ကလိပေးတာ၊မိချိုကတဟင်းဟင်းတဟင်းဟင်းတွေဖြစ်လာတော့..ငါလည်းအိုကေ ပီဆိုတာသိလိုက်ပီ။ ဒါနဲ.ငါ့ပုဆိုးကိုခေါင်းကနေကျော်ပီးဆွဲချွတ်လိုက်
တယ်။ တော်တော်လေးမှောင်နေပီဆိုတော့ ဖောင်ပေါ်မှာငါတို.ဘာလုပ်နေနေဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးလေ။ ဖောင်ပေါ်ပက်လက်လှန်နေတဲ့မိချိုလေးရဲ.ပေါင်ကြားမှာငါလည်းဒူးထောင်ထိုင်ပီးသူ.
အစိနေရာလောက်ကိုမှန်းပီး ငါ့ -ီးနဲ.ပွတ်ပေးလိုက်ပီး မိချိုကော့တက်လာတော့မှ..ငါ့ဟာကိုသူ. အဖုတ်ဝလေးမှာတေ့ပီး ဖြေးဖြေးချင်းဖိသွင်းလိုက်တယ်။ ဟ.. မဝင်ဘူးကွ..တော်တော့်ကိုကြပ်
နေတာ။ ဒါနဲ.နေရာအနေအထားလေးပြန်ပြင်ပီး သေချာလေးတေ့ပီးဖိချလိုက်တော့မှထိပ်ဒစ်လေးဝင်သွားတယ်။ထပ်ထည့်လို.ကိုမရတော့လောက်အောင်ကျပ်တောက်နေတာဟ။ မိချိုလေးက
လည်း..အားးး ကိုရွှေဘဟာကြီးနဲ.ကျမဟာလေးမရဘူးနေမှာ..ကြောက်တယ်နော်..ဆိုပီးဇွတ်ရုန်းလာတော့..ငါလည်းနို.တွေဘာတွေလှမ်းကိုင်ပီးချော့နေရသေးတာပေါ့။ နည်းနည်းလေးပြန်ငြိမ်
သွားမှမိချိူလေးရဲ.နို.အုံတင်းတင်းလေးကို သေသေချာချာလက်နဲ.စုံကိုင်ပီးဆောင့်ချဖို.ရွယ်နေကာမှ.. … … …
မိချိုလေးးးးးးး …. မိချိုလေးးးးးးး
ဆိုပီးဓာတ်မီးတဝင်းဝင်းတွေဖောင်ပေါ်ကိုထိုးလာရော။ သူ.အဖေဦးဖိုးထင်အသံဟ။ မိချိုပြန်မလာလို.လိုက်လာတာနေမှာ။ ငါလည်းမြန်တယ်ဟေ့..အသာလေးဖောင်ပေါ်ကနေရေထဲလျှောချ
လိုက်တာအသံတောင်မမြည်ဘူး။စွပ်ကနဲဆင်းချပီး ဖောင်တွဲ၂ခုကြားထဲ အသာလေးခေါင်းလေးဖော်ပီး ပုန်းနေလိုက်တယ်။ မိချိုလေးလည်းလန်.သွားပီး မြန်မြန်ထမီကောက်ဝတ်… ….
ကမ်းပါးပေါ်ကအော်နေတဲ့သူ.အဖေကို ရှင်..လာပီအဖေ..မိချိုဒီမှာဆိုပီးအဝတ်ထည့်ထားတဲ့ဇလုံကြီးကိုမပီးပြေးသွားပါလေရောကွာ။ အေပေး .. ငါလည်းချက်ချင်းရေထဲကနေမတက်ရဲဘူး..
မိချိုအဖေဦးဖိုးထင်ဆိုတာ ဓားပြအကြီးစားလက်ဟောင်းကြီး၊ လူတွေဘာတွေသတ်ဖူးတယ်ဆိုတော့လန်.ပီးအသာလေးပုန်းနေရင်းတော်တော်ကြာမှပြန်ရဲတာဟ။
တောက်!! ကိုရွှေဘဟာကလည်းဗျာ..စားရခါနီးမှကပ်ဖြစ်ရတယ်လို. ဖူးးးးး (ချာတိတ်တစ်ကောင်ကကြိတ်မနိုင်ခဲရလေသံနဲ.ဝင်ပြောတယ်)
ကောင်းခန်းလေးတွေလာတော့မှာမပီးသေးဘူး..ဟုတ်ပီလား? လို.ပြောပီး မောသွားဟန်နဲ.ရေနွေးလေကျိုက်လိုက်ဒူးယားလေးဖွာလိုက်လုပ်နေပြန်ရောဗျ။
ဒီလိုနဲ.နောက်ရက်တွေကျတော့ မိချိုလေးနဲ.လမ်းမှာမျက်နာချင်းဆိုင်တွေ.ရင် ငါ့မှာတော့ပြုံးဖြီးဖြီးလုပ်ပြရသလောက် သူကတော့မျက်စောင်းထိုးပီး အောက်နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ကိုက်ပြတယ်ဟ။
ရေချိုးဆိပ်မှာတွေ.တော့လည်း လူတွေကမလစ်ဘူးဆိုတော့ အနားကိုကပ်လို.မရတာလေ။ နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်အထိဘာမှမထူးခြားဘူးငါ့ကောင်ရေ။ ငါလည်းသူ.အိမ်ဖက်ကိုမယောင်မ
လည်သွားသွားလုပ်ကြည့်တာပဲ။ မိချိုလေးရဲ.အရိပ်အယောင်တော့မတွေ.ဘူး သူ.အဖေဦးဖိုးထင်ကြီးက ဆေးပြင်းလိပ်ကြီး ကိုက်ပီးအိမ်ရှေ.မှာထွက်ထွက်ထိုင်နေတာပဲပက်ပင်းတိုးတိုးနေတာ…
ငါ့ကိုမြင်တိုင်း မျက်မှောင်ကျုံ.ပီးဘုကြည့် ကြည့်လို.ဟဲဟဲ..ဦးလေးနေကောင်းလားဘာညာဆိုပီးနှုတ်ဆက်ပီး ပြန်ပြန်လစ်လာရတယ်။ ငါလည်းအံတကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေပီကွာ.. ဟိုနေ.ညကဖောင်
ပေါ်မှာသူ.အဖေသာလာမခေါ်ဘူးဆိုရင်ပွဲသိမ်းပီ။ အဲ့နေ.ညကဝိုးတဝါးဖြစ်နေလို.သေချာသာမမြင်ရတာ.. မိချိုလေးရဲ. အဖုတ်ကတော့ငါ့ဟာထိပ်ဖျားလေးတောင်ဝင်ဖို.အနိုင်နိုင်ဆိုတော့ ပြန်တွေး
မိတိုင်းဂလုဂလုဖြစ်နေတာရယ်၊ နောက်ပိုင်းလင်းလင်းချင်းချင်းမှာ မိချိုလေးရဲ.ဘော်ဒီကိုသေချာကြည့်မိတော့မှ တော်တော်လေးတောင့်တင်းစိုပြည်တာကိုမြင်ရလေလေ..ငါ့မှာရောဂါတက်လေလေ
အဲ့လိုနေလာရင်းကံကောင်းချင်တော့ မိချိုလေးတို.အဖိုး သူ.အဖေဦးဖိုးထင်ရဲ.အဖေ ဦးမှတ်ကြီး လေဖြတ်လို.ရုတ်တရက်လျှောသွားရောဟေ့။
မင်းတို.သိတဲ့အတိုင်းဒီလိုနာရေးဖြစ်လာပီဆိုတိုင်း ရပ်ကွက်ကာလသားခေါင်းငါ့လက်ထဲဝကွက်အပ်ရတာပေါ့လေ။ အလောင်းရေချိုး၊အခေါင်းပျဉ်စပ်ကစလို. အသုဘဆွမ်းကျွေးအတွက်ငါတို.
အရပ်ရဲ.ထုံးစံအတိုင်းဖဲဝိုင်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ဖို.အတွက်ဖဲသမားကြီးကြီးတွေကိုပါ ငါတို.ကဖိတ်ပေးရတာကိုး။ မိချိုလေးတို.အိမ်က ခုရုပ်ရှင်ရုံဘေးကတရုတ်တွေဝယ်သွားတဲ့ သရက်ပင်တွေ
အများကြီးရှိတဲ့ခြံကျယ်ကြီးလေ။ ထုံးစံအတိုင်း သူတို.ပျဉ်ထောင်နှစ်ထပ်အိမ်ရှေ.ကခြံဝိုင်းထဲမှာ ကနားဖျင်းတွေထိုးပီးအလောင်းပြင်၊ အဲ့ဒီဘေးမှာ ခုံတွေချပီးဖဲဝိုင်းပြင်၊လိုအပ်တဲ့အောက်လင်း
နေ.စဉ်နဲ.အမျှအသုဘရှုလာတဲ့လူတွေကို ကျွေးမွေးဖို.ကအစလိုလေသေးမရှိ စီစဉ်နေရတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ငါကမိချိုလေးကိုစကားကိုမပြောတာ။ ခပ်တည်တည်နဲ.နေရင်းလုပ်စရာရှိတာလုပ်
ပေးနေတာပေါ့လေ။ အသုဘ၃-၄ရက်လောက်ရှိလာတော့မ်ိချိုအဖေနဲ.အမေတို.အပါအဝင်လူကြီးတွေက ဖဲဝိုင်းကဆူညံညံအသံတွေကြောင့်အိပ်ရေးပျက်စပြုလာတော့ သူ.ကလေးတွေမိချိုတို.
မောင်နှမတွေကို ချက်ရေးပြုတ်ရေးဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးအတွက်အိမ်မှာညဖက်ချန်ထားခဲ့ပီး မြောက်ပိုင်းကသူတို.အမျိုးအိမ်ပြောင်းအိပ်တယ်။ ဂွင်တော့မိပီဆိုပီး ငါတော့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့လေ။ ငါကလည်းဖဲဝိုင်းကအကောက်တွေဘာတွေဆို ချက်ချင်းမကြာမကြာသိမ်းပီး မိချိုအမလက်ထဲအပ်ပေးတာပေါ့လေ။ အဲ့ဒီညကျတော့ မိချိုအမကိုအကောက်
ငွေတွေအပ်မလို.လိုက်ရှာတာမတွေ.ဘူးဟေ့။ ချက်ပြုတ်နေတဲ့ အိမ်နောက်ဖေးကွက်လပ်ထဲမှာလဲ တခြားအမျိုးသမီးတွေရှိပေမယ့်အဲ့ဒီမိချို အမအပျိုကြီးကိုရှာလို.မတွေ.တာနဲ.ငါလည်းအိမ်ခြံ
၀ိုင်းအနောက်ဖက်လှမ်းလှမ်းက အိမ်သာဖက်အပေါ့သွားမလို.ထွက်လာတော့ အိမ်သာနားကကြက်ခြံလုပ်ထားတဲ့ သက်ကယ်မိုးထားတဲ့တဲလေးဘေးဖက်က အဖီချထားတဲ့ကွပ်ပျစ်လေးပေါ်မှာ
ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အသံကြားတော့ ဇက်ကလေးပုပီး ကြက်ခြံကိုပြေးကပ်ရင်း အသာလေးငြိမ်နားထောင်နေလိုက်တော့ ယောက်ျားနဲ.မိန်းမစကားပြောသံလိုလိုခပ်တိုးတိုးကြားရတယ်ဗျ။
သေချာမြင်ရအောင်ဆိုပီး ကပ်သွားလိုက်တော့.. ဟီးဟီး..
မိချိုအမအပျိုကြီးနဲ. ငါတို.ရပ်ကွက်ထဲက ဗိုက်ပူမြင့်အောင်တို. နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဟ။ ၀ါးကွပ်ပျစ်လေးပေါ်မှာ စကားတပြောပြောနဲ.တွယ်နေကြတာကိုးဟ။
ကြက်ခြံထဲက မီးလုံးအလင်းရောင်က ကာထားတဲ့ဝါးထရံအပေါက်တွေကနေထိုးထွက်နေတော့ တဖက်ခြံဖက်ကပ်နေတဲ့ ချောင်ကလေးထဲက ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာသူတို.နှစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်
နေကြတာမြင်နေရတယ်ဟ။ အေပေးဗိုက်ပူမြင့်အောင်က စော်ကြီးကိုတစ်တီတူးမိုးမျှော်စတိုင်နဲ.ဗျင်းနေတာဟ.. ၀ါးကွပ်ပျစ်ဆိုတော့ တကျွိကျွိအသံတွေထွက်နေတာပေါ့။ ဟိုအပျိုကြီးကဘာအသံမှမထွက်ပဲငြိမ်ပီးခံနေတာဗျ။ ဒါမှမဟုတ် ဗိုက်ပူရဲ.ပစ္စည်းကသေးလို.ဖီးလ်မတက်တာလားမသိဘူး။ ဒီကောင့်ဟာကငါတို.အချင်းချင်း ကင်းစောင့်ရင်းအကြီးပြိုင်ကြရင်
အသေးဆုံးဘွဲ.ရထားတာလေဟားဟား။ ဗိုက်ပူကပဲ..ကပဲတဟင်းဟင်း..တဟားဟားတွေအသံထွက်ပီးအသားကုန်စွတ်ကြုံးနေတာဟ။ ငါလည်းသူတို.ကိုချောင်းရင်းဖီးလ်တက်လာတာပေါ့လေ။ ခဏလေးနေတော့ အားး ..ကောင်းလိုက်တာမမရာဆိုပီး ဗိုက်ပူပီးသွားရော။ အပျိုကြီး အပေါ်မှောက်ရက်ကလေးလှဲပီးဝက်မှိန်းမှိန်းနေ
တုံးအပျိုကြီးက ဝုန်းကနဲထလာပီး ဗိုက်ပူကိုတွန်းချလိုက်ရင်း လျှောကျနေတဲ့ဘော်လီတွေ၊ထမီတွေပြန်ဝတ်နေတယ်။ ဟ..အပျိုကြီးက လူကသာပိန်တာနော့်… နို.ကြီးတွေကထွားထွားကြီးတွေ
ငါလည်းတော်တော်လေးကိုချောင်းရင်း -ီး တောင်လာပီ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အပျိုကြီးက.. မြင့်အောင် နင်ချက်ချင်းလိုက်မလာနဲ.လို.ပြောပီး အိမ်ဖက်ကိုပြန်မလို.လုပ်တော့ ငါလည်းကြက်ခြံကနေ
ခွာပီး အမှောင်ထဲကိုရိပ်ကနဲဖြတ်ပြေးရင်း ဖဲဝိုင်းဖက်ကိုလစ်လာတာပေါ့။
၅မိနစ်လောက်နေတော့ မိချိုအမအပျိုကြီး အိမ်ထဲဝင်လာတယ်။ ငါလည်းအသာလေးကပ်သွားပီး အမ…ရော့အကောက်ပိုက်ဆံတွေဆိုပီးသူ.လက်ထဲပိုက်ဆံတွေထိုးထည့်ပေးရင်း…
အမဘယ်ရောက်သွားတာလဲ..ကျနော်လိုက်ရှာနေတာကြာပီလို.ပြောတော့.. အင်းအဲဖြစ်သွားတယ်။ ဆေးပေါ့လိပ်တွေကုန်တော့မယ်..ဟိုကောင်ဗိုက်ပူမြင့်အောင်ကိုသွားဝယ်ခိုင်းမလို.ဒီကောင့်
ကိုကောတွေ.မိသေးလားအမလို.ခပ်တည်တည်နဲ.မေးလိုက်တော့မျက်နာပျက်ပီးလှည့်ထွက်သွားတယ်ဟီးဟီး။ အဲ့ဒီအချိန်က ညဦးပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ဒါနဲ.ပဲငါလည်းဖဲဝိုင်းတွေလှည့်ပီး
အကောက်တွေဘာတွေပတ်သိမ်းနေတုံးမိချိုမောင်လေးတစ်ကောက်က ကိုရွှေဘဆိုပီး ခေါ်လို.လှည့်ကြည့်လိုက်တော့..ချာတိတ်က ဟိုတစ်ခါမြစ်ဆိပ်မှာငါ ကျွတ်ကျသွားတဲ့ဝက်ဝံပုဆိုးလေး
ကိုငါ့လက်ထဲထိုးပေးနေတယ်.. မမိချိုပေးလိုက်တာတဲ့။ ဒါနဲ.ငါလည်းဟိုဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်တော့ မိချိုလေးက အိမ်ပေါ်တက်တဲ့လှေခါးရင်းကနေငါ့ကိုပြုံးစိစိနဲ.ကြည့်ပီး ပုဆိုးခေါက်ကိုဖြေကြည့်
ငါလည်း လူရှင်းတဲ့နေရာသွားပီး မီးအိုးတိုက်ပီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်ခေါက်ထားတဲ့ငါ့ပုဆိုးလေးကိုဖြန်.ချလိုက်တော့.. စာတစ်စောင်ထွက်လာတယ်။
မိချိုလေး.. … တဲ့
ကနဖျင်းထိုးထားသော အမိုးပေါ်ကို မိုးပေါက်များ တဖျောဖျောကျစပြုလာသည်။ ညဦးပိုင်းက ဆူညံပွက်လောရိုက်နေသော အသုဘအိမ်ကဖဲဝိုင်းများလည်း တဖြေးဖြေးတိတ်ဆိတ်စပြုလာ၏။ အနိုင်ရသဖြင့်
အိမ်ပြန်သူများ၊ တစ်ပြားမှမကျန်အောင်ရှုံးနိမ့်သူများ အသုဘရှင်ဧည့်ခံသော ညလယ်စာကို စားသောက်ပီး အိမ်ပြန်သူတချို.ပြန်ကြ၍ တချို.ကား အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းတွင်ပုဆိုးခြုံကာ အိပ်နေကြလေပီ။ ငွေစ
အနည်းငယ်ကျန်သူများ အရှုံးဖြင့်အိမ်မပြန်ချင်သူတချို့သာလျှင် ဆက်ကစားနေကြသော ဖဲဝိုင်း ၀ိုင်းခြောက်တစ်ခုဆီမှ ခပ်တိုးတိုးငြင်းခုန်သံကြားနေရ၏။ တောသရက်ပင်ကြီးများ အုပ်မိုးထားသော ခြံဝင်း
ကျယ်ကြီး၏ အစွန်ထောင့်တစ်နေရာတွင် ရှိသော ကားဂိုထောင်အဟောင်းကြီး တစ်ခုရှေ့တွင် စိတ်လှုပ်ရှားနေဟန်တူသော သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းသောလူရွယ်တစ်ယောက် သက်ပြင်း
တဟင်းဟင်းချကာ အိမ်မကြီးဖက်ဆီသို့ မျှော်ကြည့်နေသည်မှာကြာလေပီ။
ပုဆိုးတိုတို၊ ဇင်စဖြင့်ချုပ်ထားသောရှပ်လက်တိုဝတ်ထားသော ဆံပင်ရှည်ရှည် ဆံဂုတ်ထောက်နှင့် အဆိုပါလူရွယ်ကား ကျွန်ုပ်တို့ ၏ဇတ်လိုက်ကျော် ကိုရွှေဘတည်း။
ဆေးလိပ်ဖွာချင်လွန်းသဖြင့် ခံတွင်းကားချဉ်လှချေပီ။ ရှပ်အင်းကျီအိပ်ကပ် ထဲကဆေးပေါ့လိပ်ကို ယောင်ယမ်းကာစမ်းမိသော်ငြား ဆေးလိပ်မီးရဲရဲလူမြင်လျှင် ခက်ရချည်ရဲ့ဟုတွေးတောကာထုတ်မသောက်ရဲ။
မိချိုလေးကားဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်မှန်းမသိ၊ရောက်မလာသေး။ အတူတူတစ်ခန်းထဲ အိပ်သော အမ ဖြစ်သူမလစ်သောကြောင့်ပေလော၊သို့တည်းမဟုတ် အချစ်ကြမ်းဟန်တူသော ကိုရွှေဘအားစိုးရွှံထိတ်လန့်သောကြောင့်ပေါ်မလာတော့ခြင်းပေလော။ တစ်တစ်ရစ်ရစ်ရှိသောငါးရံ့ကိုယ်လုံးကလေး၊ ပြုံးချိုဟန်မျက်နာဝိုင်းဝိုင်းလေး၊ မကြာသေးခင်ရက်များဆီက ထိတွေ့ခဲ့ရသောအိထွေး
နူးညံ့သော အသားဆိုင်ကလေးများအား မျက်လုံးတွင်း ပုံဖော်ကြည့်ရင်း မိမိကိုယ်ကို နွားသိုးပေါက်ကြီးကဲ့သို့ ထင်မှတ်မှားကာ “ဝွပ်ထရိန်း..ဘူးဘူး” ဟုရင်ခေါင်းသံဖြင့်အော်မိမတတ် ရင်ဘတ်ထဲတွင်ဗလောင်ဆူ စပြုလာနေလေပီ။
မိုးပေါက်ကလေးများ ကျဆင်းလာမှုက တဖြေးဖြေးများစပြုလာလေသည်။
ဂိုထောင်အရှေ့ တံခါးမကြီးအား မှီတွယ်ရင်း စောင့်စားနေသော ကိုရွှေဘကား စိတ်ပျက်စပြုလာလေ၏။ မိချိုလေးကား ပေါ်မလာတော့ပေ။ ပူလောင်ပြင်းပြနေသော အချစ်စိတ်နှင့်အတူယှဉ်တွဲနေသော
အညာမိပီ ဆိုသောအတွေးကြောင့် ကိုရွှေဘ၏တောင့်တင်းသန်မာသော ရင်အုပ်ကားကား ကြီးကား ဖားဖိုကဲ့သို့နှိမ့်ချည် မြင့်ချည်ဖြစ်နေလေပီ။ သည်းခံနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့လေ သောအခါ အံကိုသာတင်းတင်း
ကြိတ်ကာ ဂိုထောင်တံစက်မြိတ်အောက်မှ ခွါကာ အိမ်မကြီးဖက်သို့ခြေလှမ်းကျဲ ကြီးဖြင့်ထွက်ဟန်ပြင်လေ၏။
ခပ်အုပ်အုပ်လှမ်းခေါ်သံကြားလိုက်ရမှ ကိုရွှေဘ ရင်ထဲထိတ်ကနဲဖြစ်ကာ ချာကနဲလှည့်ကြည့်မိသည်။ ဂိုထောင်နှင့်ခြံစည်းရိုးကြား လူတစ်ကိုယ်စာ နေရာလေးကနေတိုးထွက်လာသော မိချိုလေးပါကလား။
အုပ်လုံးသိမ်းကာထုံးဖွဲ့ထားသော ဆံနွယ်မျှင်စအချို့ကား မျက်နာဝိုင်းဝိုင်းလေးပေါ် ကပိုကရိုဝဲကျလျှက်၊ မျက်နာပေါ်တွင် မိုးစက်ပေါက်ကလေးများတွဲလဲခိုနေသဖြင့်ဂိုထောင် အဟောင်းထဲကဝိုးတဝါးထွက်
ကျလာသော မီးရောင်ဝါကျင့်ကျင့်အောက်တွင် စိုလက်လက်မျက်နာကလေးဖြင့် ငိုမဲ့မဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားသော သနားစဖွယ်မိချိုလေး။
မိချိုရောက်နေတာကြာလှပီ.. အကို မရောက်လာခင်ကထဲက.. အကိုရောက်လာတော့ ရှက်ပီး အရမ်းကြောက်လွန်းလို့ ဒီကြားထဲမှာ ပုပီး ပုန်းနေတာ.. ခုအကိုစိတ်မရှည်ပဲ ပြန်တော့မှာတွေ့လို့ …
သနားစဖွယ်တုန်တုန်ရီရီဖြစ်နေသော မိချိုလေးကို ဂရုဏာသက်စွာဖြင့် ကိုရွှေဘထွေးပွေ့ထားမိလေသည်။
ကိုရွှေဘ၏ရင်စို့လောက်သာသာ မြင့်သော မိချိုလေးကား သူသဘောကျသောကာလသားခေါင်းလူမိုက်ကြီး၏ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးတွင် ပါးဖောင်းဖောင်းလေးအားအပ်ကာ မူနွဲ့နေရှာ၏။ ညနေကရေမိုးချိုးပီး
လိမ်းကျံထားဟန်တူသော ရှင်မတောင်သနပ်ခါးနံ့သင်းသင်းလေးနှင့်စံပယ်ဆီ အနံ့ရောစပ်ထားသော မွှေးတေးတေးအနံ့ကလေး၊ အိထွားတစ်ရစ်သောကိုယ်လုံးကလေး၏အတင်းမှီတွယ်ထားမှုတို့ကြောင့်
သာယာစပြုလာသော ကိုရွှေဘ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကား တုံ့ပြန်စပြုလေပီ။
အဲ့တော်.. အကို့ဟာကြီးကလည်း.. ကြောက်ပါတယ်ဆိုနေမှ..
မိချိုလေး၏ခပ်တိုးတိုးညည်းသံလေးကား အမှောင်ထုတွင်း ခပ်အုပ်အုပ်ထွက်ကျလာသည်။ ကိုရွှေဘ၏ကိုယ်ပိုင် လက်နက်ဆန်းကြီးကားအဆမတန်ထောင်ထကာ ရင်ချင်းအပ်ထားသော မိချို၏ချက်ကလေး တည့်တည့်ပေါ်တွင် ပုဆိုးထမီများခံနေလျှက်က ခပ်တင်းတင်းထောက်မိထားလေပီ။
မိချိုလေး.. ဂိုထောင်တံခါးသော့ခတ်ထားသလား ..အထဲသွားရအောင်နော်
သော့ပိတ်ထားတယ် အကို.. ဟိုဖက်ဘေးထရံတွေကွာကျနေတာဝင်လို့ရတယ် လာ.. မိချိုလက်ကိုကိုင်ပီးလိုက်ခဲ့..
ခြံစည်းရိုးနှင့်ကပ်လျှက် ဂိုထောင်နံရံဖက်အခြမ်း လူတစ်ကိုယ်စာကြားကလေးထဲ၂ဦးသားတိုးဝင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကိုရွှေဘကား ရှေ့မှဦးဆောင်နေသော မိချိုလေး၏ခါးကျင်ကျင်လေးအောက်မှ တစ်ရစ်လုံး
၀ိုင်းသော တင်ပါးအိစက်စက်လေးအား ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်လွန်းမက ဖြစ်ကာ အသာဆုပ်ချေလိုက်ရာ..
အာ.. အကိုကွာ ဆိုးတယ်ခဏလေးနေပါဦး
ဟူသောမိချိုလေး၏ ညည်းသံခပ်တိုးတိုးဖြင့်ကန့်ကွက်မှုကို အမှုမထားသည့်အလား ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဂျိုင်းအောက်မှလျှိုကာ အိထွားသောမိချို၏ရင်သားများပေါ် ပြေးလွှားကစားလိုက်ပြန်သည်။
ကိုယ်ကိုတွန့်လိမ်ကာ ရှောင်တိမ်းနေသော မိချိုလေး၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ၄ဝအားမီးသီးဝါကျင့်ကျင့် အလင်းရောင်မှိန်မှိန်လင်းနေသော ဂိုထောင်ထဲသို့ ကွာကျနေသောထရံပေါက်မှတဆင့် ၂ဦးသားရောက်သွားကြလေသည်။
မိချိုလေး၏ ရွှေရင်အစုံသည်ကား ပုဇွန်ဆိတ်ကလေးလို တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလျှက်ရှိလေပီ။ သာရေးနာရေးများရှိသဖြင့် ရပ်ထဲရွာထဲကာလသမီးများ ချက်ကြပြုတ်ကြရင်း အပျိုကြီးများ၏တီးတိုးစကားဝိုင်းများ
တွင် နီမြန်းသောမျက်နာ ရေငတ်သလိုအာခေါင်ခြောက်စွာ ဖြင့်နားထောင်ခဲ့ဖူးသော ကာလသားခေါင်း ကိုရွှေဘကြီး၏ လိင်မှုရေးရာ ကျွမ်းကျင်ပုံ ဇာတ်လမ်းအဖုံဖုံကို ပြန်သတိရလာမိသဖြင့် အလိုလိုမောဟိုက်
တောင့်တောင့်ထွားထွား ဆုံကောင်းလှသည်ဆိုသော ကျောင်းဆရာမအပျိုကြီး ဒေါ်နော်မူ၊ဖင်ဆော့သည်ဟုနာမည်ကျော်သော ကုန်ခြောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ခုလပ် မေမေကြည်(ခေါ်) အကြည်၊ဘဏ်
စာရေးမ ညိုညိုချောချော ဇတ်ဇတ်ကြဲ ခင်ခင်အောင် အစရှိသောမိန်းမများ၏ တန်းတန်းစွဲ အလုခံခဲ့ရသည်ဆိုသော လိင်မှုရေးရာကျွမ်းကျင်သူ.. ရပ်ကွက်ထဲက ပါးစပ်ခပ်ကြမ်းကြမ်း အပျိုခေါင်းများ၏ “ဟင်း…
ရွှေဘနဲ့သာ တစ်ခါလောက်အိပ်စမ်းကြည့် ဘဝအရသာဘာလဲဆိုတာ တန်းပီးသိသွားမယ်” ဆိုသော စကားသံများကိုပြန်လည်ကြားယောင်မိပီး အဆမတန်စိတ်လှုပ်ရှားမိလေပီ။
အံကြိတ်ပီး တီးတိုးရေရွတ်သော ကိုရွှေဘ၏ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ စကားသံကြောင့်သတိဝင်လာချိန်တွင် မိချို၏ အပေါ်ပိုင်းတစ်ဝက်လောက်ကား ဗလာ ဖြစ်စပြုချေပီ။ ရင်ကွဲအင်းကျီလေး၏ နှိပ်စိများကား ..
ထောက်တောက်မြည်အောင် ဆွဲဖွင့်ခြင်းကို ခံလိုက်ရလေပီ။ သန်မာသော ကိုရွှေဘ၏ လက်များက ဆက်တိုက်ဆိုသလို ချွေးခံဘော်လီ နီညို့ညို့လေးကို ချွတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း လျင်မြန်စွာပင် ချိတ်ကလေး
များအဖြုတ်ခံလိုက်ရချေသည်။ ဂိုထောင်အလယ်တွင် တုန်တုန်ရီရီ မတ်တပ်ရပ်နေသော မိချိုလေးကိုလည်းကြည့်ပါဦး။ ဆံထုံးအက်အက်ကလေး ထုံးထားတဲ့အောက်က မျက်နာဝိုင်းဝိုင်းဖြူဖြူလေး၊အောက်
က အပေါ်ပိုင်း ဗလာ အချွတ်ခံထားရတော့ တုန်ခါနေတဲ့ ရွှေရင်ဖြိုးဖျ။ ကိုရွှေဘကား မိချိုလေး၏ ၀ါဝင်းစိုပြေထွားကြိုင်းလှသော နို့အိအိကြီးတွေအား လုံးဝမထိ မကိုင်သေး။ ခါးအောက်ပိုင်းက ထမီအနွမ်း
လေးကို အသာအယာဆွဲ ဖြေနေ၏။ မိချိုလေး၏ခြေရင်းတွင် ဂွင်းလုံးကျွတ်ကျသွားသော ထမီလေး။
ဝတ်လစ်ဝလစ်.. တောင့်တောင့်ပြည့်ပြည့် မိချိုလေးကား မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဖြစ်နေပီ။ ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်ကလေး ကတဆင့်အောက်ကိုစုန်ဆင်းပီးကြည့်သော် အမွှေးနက်နက်ကလေးများဖုံးအပ်
သော အဖုတ်ကလေးကား ကိုရွှေဘကို စိမ်ခေါ်နေဘိအလား။
အာမေဋိတ်သံကလေး မိချိုလေးပါးစပ်က ထွက်ကျလေသည်။ အဝတ်အစားများကို ခပ်မြန်မြန်ချွတ်ချလိုက်သော ကျစ်လစ်တောင့်တင်းသော ကိုရွှေဘ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မီးရောင်အောက်တွင် ပြတ်ပြတ်သား
သားမြင်နေရလေပီ။ ထို့ထက်ဆိုးသည်ကား ဆီးစပ်အောက်နားက ထိုးထွက်ထောင်ထနေသော သန်မာထွားကျိုင်းလှသော မာန်ဖီနေဟန် လှုပ်ယမ်းနေသော လူပြောများသော ကိုရွှေဘ၏ နာမည်ကျော်၊
ပွဲတိုင်းကျော်၊ တိုက်တိုင်းအောင်.. လက်နက်ကြီးပေတကား။
ဘဏ်စာရေးမ အရပ်မြင့်မြင့်ဆံပင်ရှည်ရှည်နှင့် မခင်ခင်အောင်အား ဖင်တုံးလုံးချွတ်ကာ ဆံပင်ဆွဲလေးဖက်ထောက်ပီး မူးမူးနှင့်အသားကုန် ဆောင့် -ိုး လိုက်လို့ အဖုတ်ကွဲခဲ့ဖူးတာ ဒါ..ဒါကြီးပေါ့။
ဘုရားဘုရား..ငါ့ဟာလေးနဲ့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကုန်ခြောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ခုလပ်မ အကြည် လိုရှုပ်ပွေတဲ့ မိန်းမကတောင် လူးလှိမ့်နေအောင် အ -ိုး ကောင်းတာတော့်လို့ ချီးကျူးခဲ့ဖူးတာလေ။
ကျောင်းဆရာမ အပျိုကြီးဒေါ်နော်မူလို အိုးတောင့်တောင့်ကြီး ကိုတောင် ဖင်ပြုတ်ကျသွားအောင် ရက်ဆက် -ိုး နိုင်လို့ ရွှေဘမှရွှေဘ သည်းသည်းလှုပ်ဖူးတယ် ဆိုတာလည်းကြားဖူးပီးသား။ ဟိုတနေ့က
ဖောင်ပေါ်မှာ လက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်ခါနီး သူငါ့ကို ကိုင်တွယ်သွားတာကတော့ မှော်ဆရာကြီးလိုပါနော်။ နူးတာနှပ်တာနဲ့တင် ငါ့အဖုတ်ကလေးအရည်တွေ စိုရွှဲလို့။ ပီးတော့ နောက်နေ့ညတွေဆို ငါ့မှာ အဖုတ်
ထိပ်ဝလေးကို ဖိသွင်းသွားတဲ့ သူ့ဟာနွေးတေးတေးကြီးကို သတိရလို့အိပ်တောင်မပျော်ဖြစ်ခဲ့တာမလား။ မိချိုလေး၏ စိတ်ကား ကယောင်ကတမ်းဟိုတွေးဒီတွေး ကယောက်ကယက်ဖြစ်နေ၏။
ကိုရွှေဘ.. မိချိုအရမ်းကြောက်တယ်နော်..တအားမလုပ်ပေးနဲ့ .. မိချိုကိုသနားပါနော်..ဟင့်ဟင့်
လိင်စိတ်ကြွမှုနဲ့ ကြောက်စိတ်ရောပြွန်းနေသော မိချိုလေး၏အသံတုန်တုန်လေး ခမျာ သနားစဖွယ်။ ကိုရွှေဘကား တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော ငေါက်တောက်ကြီးကို တဖတ်ဖတ်မြည်အောင် အထက်..
အောက် လက်ဖြင့်၎-၅ ချက် ဆော့ရင်း မိချိုလေးဆီသို့တိုးကပ်လာလေသည်။ ရင်ချင်း အပ်မိသည်နှင့် မိချို၏ ဗိုက်ပေါ်တွင် အပေါ်သို့ထောင်လျက် ကိုရွှေဘ ၏ကြီးမားသန်မာလှသော လိင်တံကြီးကား နွေး
ကနဲထောက်နေမိလေသည်။ မိချို၏နဖူးဝင်းဝင်းလေးကို ကိုရွှေဘအသာလေးဖွဖွနမ်း၏။ ထို့နောက်ပါးဖောင်းဖောင်းလေး ဘယ်ညာရွရွ။ လည်တိုင်ပျော့ပျော့လေး တလျှောက်စုပ်၏။ လက်၂ဖက်ကားသိမ်လှ
သောခါးကျင်ကျင်လေး အောက်က ကားစွင့်သော တင်သားအိအိ၂ခြမ်းပေါ်တွင် ပြေးလွှားဆော့ကစားလျှက်ရှိချေပီ။
အင်း.. အကိုရယ်.. ဘယ်လိုနမ်းပေးနေတာလဲ.. မိချိုရင်တွေတအားခုန်လာပီရှင်!
ယောက်ျားနှင့် တစ်ခါမှမထိတွေ့ဖူးသော မိချိုလေးကား မှော်ဆရာကြီး ကိုရွှေဘ၏ ရင်အုပ်ကားကားကြီးထဲ မျက်နာလေးအပ်ကာ ငြီးတွားစပြုလာသည်။ ဤတွင်မှ မိချိုလေး၏ ထွားကြိုင်းသန်မာအိစက်
သော နို့ကြီး၂လုံးဆီသို့ လက်ဖဝါးကြမ်းကြီးများအား ရွေ့ကာ ကစားလေသည်။ ခပ်ရွရွအုပ်ကိုင်ကာ နို့သီးခေါင်းစူစူကြီးများအား တပြွတ်ပြွတ်စို့ပေး၏။ တဖက်အားဆုပ်ချေကာ နို့သီးခေါင်းကိုလက်ညိုးလက်
အို..ဟင့်ဟင့်.. ကိုရွှေ…ဘ.. အမလေးနော်.. အကိုရွှေဘ..
မိချိုလေး၏ ခပ်တိုးတိုးစိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အော်ညည်းသံ အဆုံး ကိုရွှေဘ၏ လက်ဖဝါးတစ်ဖက်ကား မိချိုလေးအဖုတ်ဆီသို့ ဖတ်ကနဲရောက်ရှိသွားကာ လက်ဖဝါးပက်လက်လှန်အုပ်ကိုင်ပွတ်သတ်လိုက်
ရာ အပျိုရိုင်းလေးခမျာ ဓာတ်လိုက်သကဲ့သို့ကျဉ်တက်သွားရှာလေပီ။
…… ….. …. …….